अभियान संग्रह - मानव अधिकार र प्रकाश कला ∴ पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशन द्वारा
यहाँ अभियान क्षेत्रमा सूचीबद्ध हाम्रा गतिविधिहरू छन्।
सम्बन्धित कार्यहरू पहिले नै उपलब्ध हुनुपर्छ।
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski पोस्ट अभियान Permalink
टर्की मा "अधिक लोकतन्त्र" को लागी अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 24। जनवरी 2021
टर्कीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा खतरामा पारेको छ। जुलाई 2016 मा भएको कू को प्रयास पछि, टर्की सरकारले पत्रकार र सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया विरुद्ध कडा कारबाही गरिरहेको छ। यसले टर्कीमा मिडियाको लागि पहिले नै तनावपूर्ण अवस्थालाई बढाउँछ। पत्रकारको राहदानी जफत हुन्छ, लेखक थुनिन्छन् । 130 भन्दा बढी मिडिया हाउसहरू पहिले नै बन्द भइसकेका छन्, जसमा 29 पुस्तक प्रकाशकहरू पनि कब्जामा परेका छन्।
प्रचारक र प्रकाशकहरु बीच डर र आजीविका प्रचलित छ। टर्कीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चीमिल्ची भइरहेको छ । शब्द को स्वतन्त्रता एक मानव अधिकार हो र कुराकानी योग्य छैन। विचार, सूचना र प्रेसको स्वतन्त्रता स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। हामी संघीय सरकार र EU आयोगलाई टर्कीको स्थितिमा स्पष्ट अडान लिन, आफ्नो निर्णय, कार्य र कथनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असहयोग र सक्रियताका साथ माग गर्न र यसलाई वार्ताको विषय नबनाउन आह्वान गर्दछौं। यदि टर्की र विश्वका अन्य ठाउँहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला र व्यापक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने, संघीय सरकार र ईयू आयोगले त्यस्ता देशहरूप्रति आफ्नो नीति समीक्षा गर्नुपर्छ। यसबाहेक, प्रभावित पत्रकारहरु र लेखकहरुलाई जर्मनी र यूरोप बाट छिटो मद्दत चाहिन्छ, उदाहरण को लागी आपातकालीन भिसा को नौकरशाही मुद्दा को माध्यम बाट।
पत्रकार, लेखक र प्रकाशक, पुस्तक, पत्रपत्रिका र पत्रिकाले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन् । त्यसैले हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो निवेदन लाई समर्थन गर्नुहोस् र यी मौलिक अधिकारहरु को लागी हामी संग सामेल हुनुहोस्! शब्द र स्वतन्त्रता को लागी!
हाम्रा कार्यहरूले मिडियालाई व्यस्त राख्छ र यी महत्त्वपूर्ण मानवीय मुद्दाहरू बिर्सिने छैन भनी सुनिश्चित गर्दछ। Facebook मा हाम्रो परियोजनाहरु साझा गर्नुहोस्! यदि तपाईंले हाम्रो कारणलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने, हामी कुनै पनि दानको लागि आभारी हुनेछौं ताकि हामी हाम्रो अभियानहरू स्थायी रूपमा जारी राख्न सक्छौं । केही यूरोले पनि फरक पार्छ! साझेदारी हेरचाह छ। कृपया हाम्रो परोपकारी काम लाई समर्थन गर्नुहोस्।
टर्की मा "अधिक लोकतन्त्र" को लागी अभियान अक्टोबर 25th, 2021Oliver Bienkowski
Buntesregierung मा तपाईंलाई स्वागत छ
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 11। जनवरी 2021
बुन्टेस्गेरिung पिक्सलहेलपरको एक कला परियोजना हो जुन महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याहरूलाई अन्य तरिकामा काल्पनिक "बुन्टेस्मिनिस्टरियन" स्थापना गरेर सम्बोधन गर्दछ। अवश्य पनि, बुन्टेस्गेरिung्गले संघीय सरकारले भन्दा अहिलेका मुद्दाहरूमा फरक ढ .्गले हस्तक्षेप गर्दछ। जूलियन असान्जेको बारेमा एन्जेला मार्केलको एक बयान यहाँ छ।
संघीय सरकारले यी मागहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पारेको छ। यहाँ रानी र बोरिस जोनसनको एक प्रतिक्रिया छ।
अन्य देशहरूले स्विजरल्याण्डबाट यहाँ अर्को नयाँ सालको सम्बोधनको साथ चान्सलर एन्जेला मर्केलको मागलाई जवाफ दिएका छन्
एन्जेला मार्केल, क्वीन, बोरिस जोन्सन र स्विस राष्ट्रिय राष्ट्रपति पछि, डोनाल्ड ट्रम्प पनि यस बारे केही भन्नु थियो।
"बुन्टेस्मिनिस्टेरियम जेन होमलेसलेस" ले एन्जेला मार्केलको कलात्मक व्यवस्थामा घरविहीनहरूको लागि चिसो क्याप्सुल वितरण गर्‍यो। यहाँ तपाईं यी गतिविधिहरू चित्रण गर्ने दुई भिडियोहरू फेला पार्नुहुनेछ।
कलालाई दृष्टिकोणबाट समाज बदल्नको लागि, पिक्सेलहेल्परले बिभिन्न "रंगीन" प्रोजेक्टहरू समावेश गरेको छ।
बुन्टेसरात, बुन्टेस्पोलिजेइ, बुन्टेस वित्त मन्त्रालय, बुन्टेस्केन्जलर, बुन्टेस्नाक्रिटेन्डिएन्स्ट, बुन्टेस्क्रिमनालम्ट, बुन्टेस्टाग, बुन्टेस्प्रेसेमरम्लु ,्ग, बुन्टेसमेट र संविधानको संरक्षणका लागि बुन्टेस्वर। विश्वभरि कलाकारहरूसँगै, व्यक्तिगत प्रोजेक्टहरूमा क्रियाहरू क्रमिक रूपमा प्रकाशित हुँदैछन्।
रंगीन बुद्धि सेवा
Buntesregierung मा तपाईंलाई स्वागत छ जनवरी 11th, 2021Oliver Bienkowski
05 जनवरी 2021
मानव अधिकारका लागि गहिरो नक्कली प्रयोगशाला
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 5। जनवरी 2021
गहिरो नक्कली: आशाको लागि झूट जुन क्रान्तिमा डोर्‍याउँछ!
गहिरो नक्कली भिडियो सम्पादनको नयाँ रूप हो। सिंथेटिक आवाजबाट मुखको आन्दोलन समायोजन गर्न, हामी कुनै पनि भिडियो सिर्जना गर्न सक्छौं। तानाशाही राज्य नेताहरूले भिडियोमा राजीनामा सबमिट गर्दछ, लामो युद्ध समाप्त हुन्छ, क्रान्ति घोषणा हुन्छ, वैकल्पिक नयाँ वर्षको सम्बोधन देखा पर्दछ - सम्भावनाहरू जुन अनौंठो हुन्छ त्यो असीमित छ। पिक्सेलहेल्पर डिप फेक प्रयोगशालाले यसभन्दा पहिले नै विभिन्न गहिरा फेकहरू उत्पादन गरेको छ। यस वेबसाइटमा एक चयन हेर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क सम्पर्क मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
एन्जेला मार्केलले रानी र बोरिस जोन्सनसँग जूलियन असान्जलाई माफी मागे
निस्सन्देह, रानी र बोरिस जॉनसनले तुरून्त प्रतिक्रिया दिन्छन्।
डोनाल्ड ट्रम्पले जुलियन असन्जे र एडवर्ड स्नोडेनलाई माफी दिए
एन्जेला मार्केलले घरबारविरूद्ध फेडरल मन्त्रालयको फेला पारे
मानव अधिकारका लागि गहिरो नक्कली प्रयोगशाला मार्च 26th, 2021Oliver Bienkowski
09 अप्रिल 2020
थाई लोकतंत्र डिफेन्डर कोष
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 9। अप्रिल 2020
तपाइँको भाषा छान्नुहोस्:
कृपया राजाको विरुद्ध कार्यहरू गर्न paypal@PixelHELPER.tv लाई दान गर्नुहोस्
नग्न फुटबल। थाई राजाले PXXHELPER बाट XXXSoccer परियोजना को लागि संरक्षकत्व ले। पहिलो खेलमा हारमका उनका २ ladies महिलाले एक अर्काको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गरे, रमा एक्स रेफ्री हुन्, उनका दुई रानी गोलमा छन्।
हामी अब फुटबल मैदान खोज्दैछौं, वेशभूषा सिलाई र खेललाई लाइभ स्ट्रिममा प्रसारण गर्दैछौं। हामीलाई यहाँ समर्थन गर्नुहोस्:
#Sextourist दूतावास थाईलैंड लाइटार्ट प्रोजेक्शन
हामी थाइल्याण्डमा २ 24 जुन, २०२० मा प्रजातन्त्र मनाउँछौं। ब्यान्ड Faiyen राजा राजीनामा भाषण बाहिर बोलेको छ
रमा एक्स को लागी मारियो।
लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरिरहेका थाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पिक्सलहेल्पर फाउन्डेशनलाई थाईलैंडका राजा भजिरलong्गकोर्नको बिरूद्ध बिरोध प्रदर्शन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। उनी एक क्रूर र हिंस्रक राजा थिए जसले आफ्ना सहयोगीहरूको सहयोगमा सेनामा डराउने र धम्की दिएर शासन गरे।
-67 वर्ष पुरानो सम्राट २०१ 2017 मा राजा बने तर थाईल्याण्डमा बिरलै समय खर्च गरे। धेरै वर्षदेखि उनी आफ्नो अधिकांश समय जर्मनीको गार्मीश-पार्टेनकिर्चेनको ग्रान्ड होटेल सोन्नेनबिचलमा बिताइरहेका छन र उनीसँग २० महिलाको हारम र १०० भन्दा बढी कर्मचारी र दरबारका अधिकारीहरू छन्।
उनको ह्यारममा धेरै महिलाहरू र उनको जागिरका नोकरहरू जर्मनीमा बन्दीहरू हुन्। तिनीहरू भजिरालोन्कोर्न सेवा गर्न चाहँदैनन्, तर उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन। बभेरियामा राजाका लागि काम गरिरहेका स्रोतहरूले भनेका छन् कि उनीहरुलाई अप्रसन्न तुल्याउने कामदारहरुलाई नियमित रुपमा कुटपिट गरिन्छ र सजायका रुपमा भिरोलong्गकोर्नका गुर्गहरु द्वारा कुटपिट गरिन्छ। वारहरूलाई फिल्मा गरिएको छ किनभने भजीरलांगकोर्नले पीडितहरूका भिडियोहरू हेर्न मन पराउँछन्।
थाइल्याण्डमा, राजाले उनको एउटा दरबारमा जेल र सजाय शिविर स्थापना गरे। अधिकारीहरू र सैन्य कर्मचारीहरूलाई सानो उल्लंघनको लागि महिनौंको लागि पठाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई यातना दिइन्छ, कुट्छ र कुटपिट गरिन्छ।
हालका वर्षहरूमा राजाको लागि काम गर्ने कम्तिमा पनि तीन व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। दरबारले दाबी गरेको छ कि ती मध्ये दुई जनाले आत्महत्या गरे र तेस्रो रगतको संक्रमणबाट मरे, तर सबैलाई थाहा छ कि ती तीन जनालाई यातना दिइयो र हत्या गरियो।
२०१ 2016 देखि विदेशमा निर्वासन खोजिरहेका नौ थाई प्रजातन्त्र कार्यकर्ताहरूको हत्या गरियो। तिनीहरू थाई खुफिया एजेन्सीहरू द्वारा मारिएका थिए भन्ने जबरदस्त प्रमाणहरू छन् जसले भाजीरलाk्गकोर्नका निर्देशनहरू पालन गरे।
थाईल्याण्डको राजा कानून भन्दा माथि छ र दण्डहीनताको साथ कार्य गर्न सक्छ। संविधानले उनलाई पूर्ण शक्ति दिन्छ र कसैले पनि उनीहरु विरुद्ध नागरिक वा आपराधिक आरोप लगाउन सक्दैन।
ऊ थाई सशस्त्र बलको नेतृत्व गर्ने अल्ट्रा-रॉयलिष्ट सेनापतिहरूबाट सुरक्षित र समर्थित छ। राजतन्त्र जस्ता थाई सेना लोकतन्त्रको शत्रु हो। पछिल्ला शताब्दीमा सेनाले बाह्र चोटि सैनिक पलps्गमा शक्ति कब्जा गरेको छ र राजनीतिमा लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको छ। थाईल्यान्डले कहिल्यै दिगो प्रजातन्त्रको विकास गर्न सकेको छैन किनकि राजतन्त्र र सेनाले चुनावी नीतिलाई कमजोर पार्ने षडयंत्र गरेको छ। थाइल्याण्डमा कुनै पनि विरोधाभासलाई दबाउन aji०,००० भन्दा बढी रोयल गार्ड सिपाहीहरूको सिधा कमान्डर वाजीरong्गकोर्न हो।
थाइल्याण्डको आधुनिक इतिहासमा चार पटक - १ 1973 1976, १ 1992 .2010, १ XNUMX XNUMX २ र २०१० - थाई सेनाले लोकतन्त्रको मागको लागि बैंककको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरूको आमहत्या गर्‍यो। सेनाले वास्तवमै युद्धमा विदेशी सैनिकहरूलाई मारेको भन्दा धेरै बढी थाई नागरिकहरूलाई मारेको छ।
भजीरलांगकोर्न अब उनको चौथो बिहेमा छ। उनले विवाह गरे र उनको पहिलो पत्नीलाई अपमान गरे र अन्ततः उनलाई सम्बन्धविच्छेद गरे। उनकी दोस्रो पत्नी १ 1996 2014 in मा थाईल्याण्डबाट दम्पतीका चार छोरासहित निर्वासित भएका थिए। २०१ XNUMX मा उनले तेस्रो श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गरे, उनलाई जबरजस्ती घर गिरफ्तार गरे र उनको परिवारको निर्मम सफाया गरे। उनका बुबाआमा, तीन भाई, एक बहिनी, काका र अन्य आफन्तहरू पक्राउ परेका थिए।
भजीराong्गकोर्नले एक वर्ष अघि उनको वर्तमान रानीसँग विवाह गरे तर उनले उनलाई प्रायः कमै देख्छिन् र आफ्नो अधिकांश समय ग्रान्ड होटल सन्नेनबिचलमा बिताउँन रुचाउँछिन् जब कि उनकी श्रीमती एन्जलबर्गको स्विस शहरको होटलमा बस्छिन्।
Aji० अरब युरो भन्दा बढीको व्यक्तिगत भाग्यको साथ भाजीरral्गकोर्न विश्वको सबैभन्दा धनी राजा हो। तर यो सम्पत्ति उसको लागि पर्याप्त छैन - हरेक वर्ष ऊ राज्यको बजेटबाट ठूलो रकमको माग गर्दछ, जुन थाई करदाताले लगानी गरेको छ। यस वर्ष राजाले थाई बजेटबाट 50१815 मिलियन युरो भन्दा बढी पाउनुहुनेछ।
कोविड १ p महामारी थाईल्याण्ड र विश्वभरि बढ्दै गइरहेको छ तर साधारण मानिसहरू हताश र भोकाएका छन् जबकि ग्रान्ड होटेलका राजा सोन्नेनबिचल विलासितामा बसोबास गरिरहेका छन्, कर तिर्ने पैसाको ठूलो मात्रामा खेर फाल्छन र आफ्ना हराम र उनका नोकरहरूलाई दुर्व्यवहार गर्छन्। कुटिएका र दुर्व्यवहार भएका कर्मचारीहरूले जर्मन पुलिसलाई सम्पर्क गर्न हिम्मत गर्दैनन् किनभने उनीहरूलाई डर छ कि उनीहरूको परिवार थाइल्याण्डमा बदला लिन सकिन्छ।
अधिकांश थाईहरू आफ्ना राजाको अपराध र क्रूरताको बारेमा जान्दछन्, तर उनीहरूको आवाजलाई कठोर कानूनहरूले मौन पारिदियो। राजतन्त्रको आलोचना गर्ने जो कोही वर्ष पहिले जेल मा छ।
थाईहरू राजा भजिरल V्गकोर्नबाट पीडित मात्र होइनन्। उनले जर्मन करदातालाई पनि भार पारे किनकि सुरक्षा र सुरक्षाका लागि राज्यले तिर्नु पर्छ। उनी जर्मन भूमिमा मानवअधिकार उल्ल .्घन गर्दछन् - बेचबिखन र महिला दुर्व्यवहार र आफ्ना दासहरुलाई क्रूरता, जसलाई ऊ दासहरु जस्तो व्यवहार गर्दछ। जर्मनहरूले आफ्नो देशमा यो सहन गर्नु हुँदैन।
तसर्थ, थाई प्रजातन्त्र कार्यकर्ताहरूले सँगै कदम चाल्न PixelHELPER फाउण्डेशन समर्थन गर्दछ।
हामी चाहन्छौं कि संसारले बाजिरोk्गकोर्नको भ्रष्टाचार र क्रूरताको बारेमा जानोस्।
हामी उसलाई थाई मानिसहरुलाई यातना दिन रोक्न चाहन्छौं।
हामी चाहन्छौ कि जर्मनीले उसलाई निकाले किनकि उसले धेरै कानूनहरूको उल्लंघन गरेको छ।
हामी उसलाई थाईल्याण्डमा उसको अपराधको लागि मुद्दा चलाउन चाहन्छौं।
जबसम्म उसलाई घर पठाउनु हुँदैन न्यायको सामना गर्न हामी आफ्नो अभियान समाप्त गर्दैनौं।
यदि तपाईं हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई एक सन्देश पठाउनुहोस् र PixelHELPER लाई हाम्रो वेबसाइटमा दान गर्नुहोस्: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
हामी सबै एकसाथ भेजरलोk्गकोर्नको डरको शासन समाप्त गर्न र थाईल्याण्डमा वास्तविक प्रजातन्त्र ल्याउन सक्छौं।
थाई लोकतंत्र डिफेन्डर कोष अप्रिल 14th, 2021Oliver Bienkowski
19 जनवरी 2020
युरोपियन क्यान्ड रोटी आपतकालिन सहायता - अफ्रिकाको लागि खाद्य स्थिरता
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 19। जनवरी 2020
Ait Faska को गरीब ग्रामीण जनसंख्या लाई रोटी वितरण
PixelHELPER को Afrikahilfe परियोजना मा स्वागत छ। Menschen für Menschen को कार्ल हीनज बोममको मृत्यु पछि तुरुन्त हामीले अफ्रिकामा हाम्रो गतिविधिको आधार बनाउन मोरक्कोमा 2014 लाई भेट्टाए। अब,5वर्ष पछि, हामीले एकदम थोरै हासिल गरेका छौ र अफ्रिका भरमा विकास सहायता प्रदान गर्न सक्षम छौं। हाम्रो उत्तर अफ़्रीका मुख्यालयहरूबाट यो व्यवस्थित गर्न सजिलो छ यो भन्दा युरोप।
परियोजना ढु the्गा मरुभूमिको बीचमा सुरू हुन्छ।
परियोजना स्थिति अगस्त २०१।
हामीले मोरक्कोको माराकेचबाट km० किलोमिटर टाढाको सानो फार्मलाई अन्तर्क्रियात्मक लाइभ स्ट्रिम स्टुडियोमा परिवर्तन गरेका छौं। क्यामेराको आँखा मुनि उत्पादन मा, हामी हाम्रो स्वयं प्रोग्राम प्रोग्राम इंटरएक्टिव प्रत्यक्षप्रवाह swarm सहायता सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौं, जुन हामी भविष्यको उपयोगको लागि अन्य विकास सहायता संगठनहरूलाई पनि प्रस्ताव गर्नेछौं।
पिक्सेल सहयोगी मान्छे स्वतन्त्रता, आत्म-संकल्प दिन र responsibly सामाग्री बिना कोर्न आफ्नो जीवन चाहनुहुन्छ र छोराछोरीलाई राम्रो भविष्य दिन चाहनुहुन्छ। पिक्सेल सहयोगी वैश्विक, आर्थिक सामाजिक, पर्यावरण र राजनीतिक अवस्थामा दिगो सुधार योगदान पुग्छ। पिक्सेल सहयोगी गरिबी झगडे र मानव अधिकार, कानून र लोकतन्त्र को नियम बढवा दिन्छ। पिक्सेल सहयोगी संकटहरूको र हिंसात्मक संघर्ष को रोकथाम गर्न योगदान पुग्छ। पिक्सेल सहयोगी एक सामाजिक बस, ecologically कारगर र दिगो वैश्वीकरण समर्थन गर्दछ।
२०१ our मा माराकेचमा टेड टकमा हामीले हाम्रो लाइभस्ट्रीम झुण्ड सहायता सफ्टवेयर प्रस्तुत गरेका छौं। फार्म पहिलो व्यावहारिक स्थान हो जहाँ हामी हाम्रो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछौं। हामी हाम्रो प्रोजेक्टमा नयाँ समर्थकहरू र आगन्तुकहरूको लागि तत्पर छौं।
उत्तरी अफ्रीकाको सब भन्दा ठूलो चारकोल स्टोभमा फायर गर्दै आइत फास्का मोरोक्को
(Meter मिटर फ्लैट छत निर्माण, धेरै दुर्लभ)
क्यान्ड रोटीको साथ खाना र अभावको बिरूद्ध युद्ध र मौसम परिवर्तनले गर्दा
इन्स्टाग्राम फिड हेर्न तपाईको आफ्नै एपीआई टोकन हाम्रो प्लगइनको इन्स्टाग्राम विकल्प पृष्ठमा थप्न आवश्यक पर्दछ।
राहत आपूर्तिको लागि अन्तरक्रियात्मक उत्पादन प्लेटफर्म
लाइभस्टिम स्विम मद्दत सफ्टवेयर
हामीले माराकेचमा टेड टकमा हाम्रो प्रत्यक्षप्रवाह झुण्ड सहायता सफ्टवेयर प्रस्तुत गरेका छौं। टेड टक एक घटना हो जहाँ प्रवृत्ति-सेटि spe भाषणहरू दिइन्छ जुन शीर्षकहरूमा हामीलाई सार्दछ र भविष्यमा हामीलाई सार्नेछ।
युरोपेली डिब्बाबंद रोटी आपातकालीन सहायता
Mbera शरणार्थी शिविर पिक्सेल HELPER प्रत्यक्ष प्रसारण मुख्यालयबाट २००० किलोमिटर टाढा छ। हाम्रो क्यान्ड रोटी आपतकालीन सहायताको बेकरीले शरणार्थी शिविरहरू र प्रकोप क्षेत्रहरूको लागि दीर्घ आयु रोटी उत्पादन गर्दछ। मोरक्कोमा उत्पादित स्पिरुलिना शैवालले गोदाममा कुपोषण र कुपोषण बिरूद्ध मद्दत पुर्‍याउँछ। डब्ल्यू।हामी शरणार्थी शिविरको अगाडि एक स्थान बनाउन चाहन्छौं र मानिसहरूलाई मद्दत गर्नको लागि हाम्रो लाइभ्रीम स्विम मद्दत सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। शरणार्थी शिविर, मरिटानियामा4सबैभन्दा ठूलो शहर हो, हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि युद्ध शरणार्थीहरूको पीडा कम छ।
PixelHELPER ले एक अद्वितीय ठाउँ सिर्जना गरेको छ र श्रोताहरूलाई अफ्रिकामा राहत सामग्रीको उत्पादनको नजिक ल्याएको छ। आपतकालीन क्युब्स निद्राको झोला, ग्यास चुल्ती, प्राथमिक उपचार किट र एम्प; फ्ल्यासलाइट सुसज्जित। तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै चीज जब तपाई एक प्राकृतिक आपतकाल पछि तपाईको घर गुमाउनुहुन्छ।
हाम्रो परियोजनालाई समर्थन गर्नुहोस्
IBAN DE93 4306 0967 1190 1453 00
SWIFT / BIC: GENODEM1GLS
कीवर्ड: कला र संस्कृतिको प्रबर्धन
हामी रोजगार र संभावनाहरू सिर्जना गर्दछौं
हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं र सार्वजनिक फुटबल पिचहरू, सार्वजनिक स्वैप क्याबिनेटहरू र सांस्कृतिक प्रसाद निर्माणको साथ एक सिद्ध विकास सिर्जना गर्दछौं। हाम्रो क्षेत्र एक आर्थिक देहात को बीचमा छ रूपमा धेरै स्थानीय कम्पनीहरु र आदेश कच्चा माल आपूर्तिकर्ता लाभ उठाउन र आफूलाई नयाँ कर्मचारीहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
मोरक्को अफ्रीकामा सबैभन्दा आधुनिक देश हो।
मोरक्कोबाट हामी टापेर र क्यासाब्लांकाको गहरे समुह बंदरगाहहरु संग सबै संग्राहक देशहरुमा समुद्री कन्टेनर संग पुग्छौं। युरोपको सम्बन्ध उत्कृष्ट छ। स्पेनिश मुख्य भूमिबाट माराकेचबाट, त्यहाँ केवल6घण्टा कार द्वारा।
हामी यहाँ एक केन्द्र छिटो मानवीय सहायता समन्वय गर्न को लागी र कार, समुद्री कन्टेनर वा विमान मार्फत तपाईंको गन्तव्यमा चाँडै ल्याउन। यहाँ साइटमा हामी सजिलैसँग सब चीज बनाउन सक्छौं जुन शरणार्थी शिविरमा व्यक्तिहरूले आवश्यक छ। हामी पहिलो चौकी माउरिटानियामा UNHCR शिविरको अगाडि स्थापित गर्नेछौं।
हाम्रो प्रत्यक्ष स्ट्रीम प्रविधिले6अन्तरक्रियात्मक बाकहरू लाइभ भिडियोको बायाँतिर उत्पन्न गर्दछ। यी बक्सहरू गतिविधि र दानको रकमको सन्दर्भमा कुनै पनि समयमा हाम्रो द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामीले एक अन्तरक्रियात्मक स्विम मद्दत प्रकार्य सिर्जना गरेका छौं जसले हामीलाई शरणार्थी शिविरमा हालको स्थितिको प्रतिक्रिया दिन र प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्न सक्षम गर्नेछ।
हाम्रो Schwarmhilfe सफ्टवेयर को क्षमता पनि अन्य एनजीओहरुको लागि उपलब्ध छ। हामीलाई कुरा गर्नुहोस्।
युरोपियन क्यान्ड रोटी आपतकालिन सहायता - अफ्रिकाको लागि खाद्य स्थिरता जनवरी 27th, 2021Oliver Bienkowski
जबरजस्ती श्रम शिविर बो अरफा मोरोक्कोको एउटा प्रलय स्मारक
मोरक्कन राज्य मार्फत २ बुलडोजरहरूको ध्वंस। ओबेलिस्क एक सन्याडियल थियो र युगुर स्मारकसँग केहि गर्नको लागि थिएन।
यद्यपि बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या मोरक्कोमा बसोबास गरिरहेका छन्, यद्यपि युगर्स चीनमा समर्थित छैन। यसका लागि हामीले एउटा स्मारक निर्माण गर्‍यौं जुन इजरायलको एउटा अखबारले बर्लिन होलोकास्ट स्मारकमा यस्तै प्रकारको रिपोर्ट गरिसकेपछि अरब प्रेसले मात्र याद गरेको थियो। बीबीसी अरबीले परियोजनामा ​​रिपोर्ट गरे। यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस बुमेराrang्गलाई उन्मूलित गर्यो जसमा रिपोर्टि longer अब युगर्सको लागि नभई इजरायल / प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको लागि प्रतिबद्ध थियो। कलाकृति सफल भयो!
विकिपेडियामा रहेको मोरक्कनको प्रलय कथामा यहूदीहरू मर्ने मरूभूमिमा दास मजदुर शिविरहरू कहिले पनि उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो स्मारक मोरक्कनको आन्तरिक मन्त्रालयले निर्माण गरेको एक बर्ष पछि ध्वस्त भयो। यसका साथ हामीले विकिपीडियामा मोरोक्कोको इतिहासमा जबरजस्ती श्रमको विषयलाई ऐतिहासिक झूटा शिक्षा र सेमिटिज्म बिरुद्द लड्नका लागि ल्यायौं। र यद्यपि यो आरम्भदेखि नै कलाको स्थापना भए पनि चीनले मानव अधिकार उल्लंघनलाई उइगुरसको बिरूद्ध औंल्याउनु थियो।
कलाको बुमर्याrangले फेरि मुस्लिम विरोधी जातिवादको विरुद्ध लड्न र विकिपीडियामा बिर्सिएका जबरजस्ती मजदुरहरूको उल्लेख गर्न रचनात्मक चाप उडायो।
दुर्भाग्यवस, मोरक्कोलाई एक्शन आर्टको त्यस्ता प्रकारहरू थाहा छैन। टोली
हाम्रो मोरक्कन साइटमा, रर्ड अफ द रिंग्सको अर्थान्क टावरको नक्कलको साथ मोरक्कन अधिकारीहरूले जीवन कठिन बनाएका छन। जर्मन टीएचडब्ल्यूका 500०० व्यक्तिको लागि सूपको भान्छा जफत गरियो, जर्मन विकासकर्मीको लागि चिहान खसेको र बुलडोजर नष्ट भएको थियो र विकास सहायता बेकरी, जसबाट जनस directly्ख्याले प्रत्यक्ष लाभान्वित भए, भुईंमा उखेले।
मोरक्कोको जबरजस्ती श्रम शिविरहरूमा, सहारा रेलवेमा काम गरिरहेका हजारौं मानिस मरे। नतिजा स्वरूप, मोरक्कोको पनि एउटा होलोकास्ट कहानी छ। उनीहरू बुउरफालाई मरुभूमिको औशविट्स् भन्दछन्
मोरक्कोको राजा मोहम्मद6लाई खुला पत्र।
प्रिय Highness मोहम्मद VI, कला एक अपराध हैन। मानव अधिकार र कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धनको लागि हाम्रो जर्मन संगठनले तुरून्त तपाईंलाई मोरक्कोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्ल .्घनको बारेमा गुनासो गर्नु पर्छ। यो सबै अफ्रिकाका लागि मोबाइल सूप भान्छाबाट सुरु भयो जुन तपाईको टा customs्गियरमा भन्सार अधिकृतहरूले मे २०१ 2018 देखि जफत गरे किनकी हामी माराकेचमा सूपलाई व्यापारिक रूपमा बेच्न चाहान्छौं। एक वर्षको लागि हामीले भर्खरको कचौराको डिब्बाबाट मानिसहरू खाइरहेका देख्यौं र हाम्रो सूपको भान्छाले निश्चित रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई भर्न मद्दत पुर्‍यायो। तपाईंको अधिकारीहरू हाम्रो कलाकार बगैंचा किन च्यात्दैछन्? तपाईंको अधिकारीहरूले सेप्टेम्बर २०१ in मा भवन निर्माण आवेदनलाई जवाफ दिएन। प्रत्येक दिन हामीले तपाईंको मोरक्को दूतावासहरू मार्फत संसदबाट देशका सबै च्यानलहरू मार्फत तपाईंको प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यौं, जुन काम गरेन। तिनीहरूले कहिले जवाफ दिएनन्। डिसेम्बर २०१ In मा, हाम्रो पिक्सेलहेल्पर विकासकर्मी टोमबिया ब्राइडको मृत्यु भयो किनभने उनी अधिकारीहरूको व्यवहार देखेर असाध्यै निराश थिए कि उनको मुटुको चोटप आउँदा मृत्यु भयो। अवश्य पनि, कुनै उपस्थित नभए उनलाई ज्ञापनपत्रको रूपमा दफन गरियो र दोष मोरक्कन अचालकमा राखियो। हामीले उसको सम्झनामा एउटा सेन्डियल निर्माण गर्यौं, यसको बुल्डोजरले यसलाई नष्ट गर्यो। हामीले मोरक्कोमा एक वर्ष भित्रमा १०,००,००० डलर लगायौं। अफ्रीकामा खाद्य स्थिरता सुनिश्चित गर्न क्यान्ड रोटी बेकरी सञ्चालन गर्‍यो र हाम्रो गाउँलाई दिनहुँ नि: शुल्क रोटी उपलब्ध गरायो। तपाइँको जेंडरमेरीले हामीबाट पुलिस स्टेशनमा आगन्तुकहरू लिन्छन् यस आधारमा कि यो हामीलाई भ्रमण गर्न मनाही छ। हाम्रो पाहुनालाई धोकेबाज हुन सक्ने आरोपको साथ सोधपुछ र फ्रीमासनलाई सहनु हुँदैन। त्यसोभए हाम्रो आगन्तुकको अनुहारमा थप्पडहरू थिए। पुलिसले धेरै पटक पुलिसले हाम्रो सम्पत्ति भ्रमण गर्नबाट पत्रकारलाई रोकेका छन। यद्यपि हामीसँग तपाइँको देशमा लगानीकर्ता भिसा लिन सबै कागजातहरू छन्, खरीद विकल्पको साथ year बर्षको पट्टा सहित, तपाइँको पुलिस हामीलाई कडा पठाउन चाहान्छ। हामी क्यान्ड रोटी बेकरीको विनाश र पुनर्निर्माणको लागि क्षतिपूर्तिको लागि कल गर्दछौं। तपाईंले आफ्ना स्थानीय पुलिस अफिसरहरूलाई पनि सूचित गर्नु पर्छ कि कलाकारहरू आतंकवादी होइनन्। किनभने त्यस्तै हामीसँग व्यवहार गरिन्छ। हाम्रो कर्मचारीहरूलाई म्याकेडम, क्याडको बाँया हातले शारीरिक बाहिरी भित्तामा प्वालहरू बन्द नगर्न धम्की दिन्छ। चिनी फेस्टिवलमा, हाम्रो टोलीलाई कुकुरले टोकेको कारण रेबीज इंजेक्शन आवश्यक थियो। दुर्भाग्यवश, उनीहरुको स्वास्थ्य विभाग Ait Weir र माराकेच बन्द थियो। हामी पुनर्निर्माणको लागि १०,००,००० युरो र Ait Weir मा तपाईंको पुलिस प्रमुख र Ait फास्का मा कैद बाट एक व्यक्तिगत माफी माग्छौं। जो आफैंसँग कहिले बोल्दैनन् तर बाहिरी साथीहरूसँग मात्र कुराकानी गर्छन्। हाम्रो पाहुना बिरूद्ध पुलिस हिंसाको कारणले, हामीलाई हाम्रो कला परियोजनाहरुमा काम गर्न Ait फास्क र Ait Weir बाट १०० बर्षको लागि हाम्रो रोजाईको १०० कर्मचारी चाहिन्छ।
मोरक्को मा बिर्सिएका जबरजस्ती मजदुरहरु शिविर। धेरै यहूदीहरू यहाँ मरे।
गर्मी मा 1942 एक डा। भ्रमण व्यास-डेनान्ट अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस मिशन (IRC) ले बौद्निब, बो आरफा र बर्गुन्ट शिविरहरूको नेतृत्व गर्‍यो। यी दुर्गम गाउँहरूमा आज कसैले पनि सूर्यलाई याद गर्दैन।
कालो ताराहरूले एक इकाईमा प्रलय स्मारक बनाउँछ। आगन्तुकहरू यी मार्फत भौंतारिन्छन्
विश्वको सब भन्दा ठूलो होलोकास्ट स्मारकको नक्कल
विनाश भन्दा पहिले देखा पर्दछ। 1 मोरक्कनको साथ निर्माण 10 वर्ष।
साथै वाल्टर लेबेकले म्युरल ध्वस्त पार्यो र पेन्ट गरियो। EU झण्डा जमीनमा बिग्रिएको छ।
मोरोक्कोको फ्रान्सेली अभिलेखमा कम्तिमा ,14००० पुरुष सहित विभिन्न प्रकारका १ 4.000 शिविरहरू थिए। एक तिहाइ विभिन्न देशका यहूदी थिए। ती कैदीहरू सिदी अल अयाची बाहेक सबै पुरुष थिए, जसमा महिला र बच्चाहरू थिए। केही शिविरहरुमा राखिएका जेलहरु थिए, अर्थात् भिचि शासनको राजनीतिक प्रतिपक्षीहरुकोलागी वास्तविक जेल। अरूहरू शरणार्थीहरूका लागि ट्रान्जिट शिविरहरू थिए। अरू कतिपय भने विदेशी कामदारहरूको लागि आरक्षित थिए। वा विचि अन्तर्गत बोऊ अरफा शिविरमा रहेका यहूदीहरू, ट्रान्ससहरा रेलवे तेस्रो राइकको साथ सहयोगका लागि महत्त्वपूर्ण प्रतीक बने। त्यसकारण श्रमिकहरूको ठूलो आवश्यकता थियो। ती जो धेरै मरे पछि काम गर्न सक्दैनन्।
हजारौं स्पेनिश रिपब्लिकनहरू रेल ट्र्याकको निर्माण र मर्मतका लागि विदेशी कामदारहरूको समूहमा जिम्मेवार भए। फ्रान्कोको दमनबाट भागेर कामको गति क्रूर र अमानवीय थियो। स्पेनिश कामदारहरूलाई वास्तविक दोषी बनाइयो। मध्य युरोपबाट निर्वासित यहूदी र फ्रान्सेली कम्युनिष्टहरूलाई त्यहाँ सारियो। त्यहाँको दैनिक जीवन डरलाग्दो थियो। धेरै दुरुपयोग, यातना, बिमारी, भोक वा तिर्खा, बिच्छी डंक वा सर्पको टोकेले मरे।
बर्गेन्ट (ऐन बेनी माथर) गोदाम औद्योगिक उत्पादन विभाग द्वारा संचालित थियो। यो यहूदीहरूको लागि मात्र आरक्षित गरिएको थियो (१155 जुलाई १ 1942 in२ मा र त्यसपछि 400०० सन्‌ १ 1943 .1940 को प्रारम्भमा सीआरआईको रिपोर्ट अनुसार)। "तर त्यो आत्मिक सान्त्वनाले बेर्ग शिविर सबैभन्दा खराब थियो भन्ने तथ्यलाई कम गरेन," जम बैदाले भने। रेड क्रसलाई बन्द गर्न भनियो, बर्गगुडमा बसोबास गर्ने यहूदीहरू, विशेष गरी मध्य युरोपका, पहिले फ्रान्समा भागेका थिए। १ 1922 .० को पराजय पछि डिब्बिलाइज गरिएको र त्यसपछि "प्रशासनिक कारणले" इंटर्नर गरिएको विदेशी सैन्य स्वयंसेवकहरू। १ the २२ मा फ्रान्स आएका टर्की नागरिक शाउल अल्बर्टको कुरा पनि यस्तै थियो। मार्च १ 1943 .XNUMX मा उनको रिहाइ नहोउन्जेल उनी बर्गावामा कैदमा थिए। आफ्नो डायरीमा उनी लेख्छन्:
"१०। फेब्रुअरी (१ 10 1941१): दिनभर ढु stones्गा भाँचे। मार्च दोस्रो ...: जर्मन यहूदीहरूसँग पाँचौं समूहमा हस्तान्तरण। मलाई यो पटक्कै मनपर्दैन। काम उस्तै छैन; हामीले गिट्टी बनाउनु पर्ने थियो ... अप्रिल 2th: हामी अब यस जीवनलाई सहन सक्दैनौं। मलाई ज्वरो आएको छ, दाँत दुख्ने ... सेप्टेम्बर २२: रोश हशनाह: कोही पनि काम गर्न चाहँदैनथे ... अक्टुबर १: खाएन ... "
गार्डहरू, जसमध्ये धेरैजसो जर्मन थिए, निरy्कुश, शत्रुतापूर्ण र द्वेषपूर्ण व्यवहार गरे। "उनीहरूले कुख्यात एनएस-एसएसमा भाग लिनुपर्दछ।" केही कैदीहरू भागे, क्यासाब्लान्का पुगे र सेनामा सामेल भए।
१०,००० बासिन्दाको सानो शहर, बौद्निबमा, वर्तमान सैन्य ब्यारेकहरू फ्रान्सेली सेना शिविरका अन्तिम साक्षी हुन्। पुराना बासिन्दाहरूले स्मृतिका टुक्राहरू राख्छन्: “म तपाईंलाई निश्चित रूपमा दुईवटा कुरा भन्न सक्छु। पहिलो बौद्धनिब शाखा हो जुन प्राय: यहूदीहरू मिलेर बनेको हुन्छ। दोस्रो यो हो कि शहरका धेरै जसो शिविरहरू प्राथमिक स्कूलमा शिक्षित थिए "(टेल क्विल पत्रिका नं। २10.000, मे १ -274 -२,, २००))।
कम्युनिष्ट पत्रकार मौरिस रुएलाई त्यहाँ इंटर्नर गरिएको थियो। उनले हामीलाई भने कि "Jews० जना कैदीहरूमध्ये तीन क्वार्टरमा कम्युनिष्ट, समाजवादी र गौलिस्टहरू थिए 40० यहूदीहरू केही महिना आउनु भन्दा पहिले।"
8 मा अमेरिकी अवतरण पछि। नोभेम्बर 1942 मोरक्को एलिजको पक्षमा सामेल भयो। जनवरी 1943 मा, मित्रहरू कासाब्लान्कामा एक सम्मेलन मा भेला भए। एउटा रणनीतिक र सैनिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको लगत्तै सिसिलीको आक्रमणबाट (अपरेशन हस्की, जुलाई 1943) जर्मनीले कब्जा गरेको यूरोपको अन्त्यबाट सुरू हुन्छ।
बो अरफामा निर्माण कार्यमा अवरोध आएको थिएन र अवस्था अझ राम्रोको लागि परिवर्तन भएन। कम्युनिष्ट र यहूदीहरूलाई प्रतिस्थापित गरेका इटालियन र जर्मन बन्दीहरूले भन्दा उनीहरूलाई राम्रो तलब दिइयो। जे होस्, ट्रान्स सहारा को निर्माण एक दैनिक नरक रहन्छ। प्रोजेक्ट, जसलाई दुरुपयोगको रूपमा तोकिएको थियो, फ्रान्सले मात्र 1949 छोडिदिए।
अन्यथा, बीयरिंगहरू हतारमा 1942 को अन्त्य र 1943 को सुरूवात बीचमा विघटन गरियो।
बिल क्रान र करीन डेभिसनले लिखित वृत्तचित्र, आर्टेमा प्रसारित गरे
उत्तर अफ्रिकामा पहिलो प्रलय स्मारक
विश्वव्यापी रूपमा सताइएको अल्पसंख्यकको बिरूद्ध एक संकेत। उत्तर अफ्रिकामा पहिलो प्रलय स्मारकको निर्माण स्कूल र जनसंख्याको लागि प्रलयको बारेमा जानकारीको स्रोतको रूपमा सेवा गर्ने उद्देश्यले हो।
जब प्रत्येक ब्लक एक हजार शब्दहरूको लायक हुन्छ। जुलाई १th, उत्तरी अफ्रिकामा पहिलो होलोकास्ट स्मारकमा निर्माण सुरु भयो। हामीले भूकम्प अवरोधहरूको भूलभुलैयामा आगन्तुकहरुलाई दिनको लागि यातना शिविरमा मान्छेहरूको असहायता र मृत्युको डरको भावना प्रदान गर्न स्टील्स स्थापना गरेका छौँ। हामी उत्तर अफ्रिकामा एउटा यस्तो ठाउँ सिर्जना गर्न चाहान्छौं जुन डिजिटल युगमा सम्झना आउँदछ। प्रत्यक्ष स्ट्रिमको साथ, त्यहाँ दर्शकहरू निर्माण साइटमा छन् र तपाईंको अनुदानको साथ निर्माण हुने श्रमिकहरू र ब्लकहरूको संख्यालाई प्रभाव पार्न सक्छन्। जति तपाईले हेर्नुहुन्छ र दान गर्नुहुन्छ, ठूलो प्रलय स्मारक हुन्छ।
माराकेचमा भएको होलोकास्ट मेमोरियल विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियलको आकार5पटक पछि सूचना केन्द्रको वरिपरि 10.000 ढु stone्गाको पाटीमा हुनेछ जसले आगन्तुकहरूलाई प्रलयका बारे शिक्षा दिन्छ।
पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशनका संस्थापक ओलिभर बिएनकोवस्कीले याद वाशमको डाटाबेसमा आफ्नो उपनाम खोजे र केही प्रविष्टिहरू फेला पारे, त्यसपछि उनले पछिल्लो प्रलय स्मारक अफ्रिकामा रहेको र दक्षिण अफ्रिकामा एउटा मात्र भेट्टाए। किनकि यो मोरक्कोबाट आधा विश्व यात्रा जस्तो छ, उसले पिक्सेलहेल्प साइटमा होलोकास्ट स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरे। छिमेकी सम्पत्तीहरू सबै खाली छन्, त्यसैले कम्तिमा 10.000 स्टील्स निर्माण गर्न कोठा छ।
जबरजस्ती श्रम शिविर बो अरफा मोरोक्कोको एउटा प्रलय स्मारक अप्रिल 21st, 2020Oliver Bienkowski
ह Hongक Kong स्वतन्त्रता / चीन विरोधी अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 17। जनवरी 2020
ह Hongक Kongको अन्त्य
पूर्व ब्रिटिश ताज उपनिवेशलाई वशमा राख्न चीन पहिलो पटक कानुनी कार्यवाही गर्दैछ। चिनियाँ नेतृत्वले आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्दैछ र पश्चिमी विश्वलाई चुनौती दिन्छ।
चिनियाँ पीपुल्स काH्ग्रेसले # हongकong्ग सुरक्षा कानून पारित गर्‍यो, जसमा "एक देश, दुई प्रणाली" र प्रजातन्त्रलाई दफन गरिन्छ। जर्मनीको झण्डामा हल्का प्रक्षेपण # बुन्डेस्ट्याग # बुन्डेसरेगेरु & र @ हिकोमास ह Hongकongको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिन्छ। #HongKongNeedsHelp #HongKongProtosts
कोरोना महामारीको थालनी पछि पहिलो पटक, ह thousandsक Hongमा हजारौंले विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावको बिरूद्ध प्रदर्शन गरे। प्रहरीले अश्रु ग्याँस, काली मिर्च स्प्रे र पानीको तोपको प्रयोग गर्थे। दर्जनौं पक्राउ परेका थिए।
बेइजि'sले हversक Kongमा विध्वंसकारी र अलगाववादी गतिविधिलाई लक्षित गर्ने सुरक्षा कानूनको लागि आइतबारको प्रदर्शनलाई उकास्न लगायो। कोरोना भेलामा प्रतिबन्धको बाबजुद, हजारौंले कोजवे बे र वान चाईको किनमेल क्षेत्रहरूमा सडकमा उत्रे।
"स्वर्गले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई ध्वस्त पार्नेछ" भनेर अन्य थोकमा ब्यानर लगाएको थियो। स्वतन्त्रताको लागि बारम्बार आह्वान पनि गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूको बिरूद्ध ठूलो संख्यामा सुरक्षा बलहरू लागे।
त्यो बिरोध साँझ सम्म जारी रह्यो। कट्टरपन्थी कार्यकर्ताहरूले पसलका झ्यालहरू फ्याँके। कोरोना महामारीको कारण, घनी जनसंख्या भएको एशियाई आर्थिक र वित्तीय महानगरमा दूरी नियमहरू लागू हुन्छन्, जसले अधिकतम आठ व्यक्तिको समूहलाई अनुमति दिन्छ।
बेलायतले चीनबाट ह Hongक Kongलाई १ 150० बर्षमा भाडामा लिएका थिए, पहिलो ह Hongक Island आइल्यान्ड, पछि कोउलुन र नयाँ क्षेत्र। सम्झौता जून 30०, १ 1997 XNUMX on मा समाप्त भयो। बेलायतीहरूले आफ्नो मुकुट उपनिवेश चीनलाई हस्तान्तरण गरे।
चिनियाँ सुधारवादी डेg सियाओपिंग (१ 1904 ०1997-1980-१1982 XNUMX)) ह Hongक Kongको कानुनी रुपमा सम्भव तुल्याउन १ XNUMX s० को शुरुमा "एक देश, दुई प्रणाली" भन्ने शव्द आविष्कार गरे। "एक देशमा दुई प्रणालीहरू व्यवहार्य र अनुमतियोग्य छन्," डेg्गले १ XNUMX XNUMX२ मा भने। "तपाईंले मुख्य भूमिमा भएको प्रणालीलाई नष्ट गर्नु हुँदैन, नत्र हामीले अर्को देशलाई नष्ट गर्नु पर्छ।"
ह Hongक Kong स्वतन्त्रता / चीन विरोधी अभियान जुन 15th, 2020Oliver Bienkowski
18 जनवरी 2019
हामी रायफ बदावी र जूलियन असान्जको लागि लड्छौं!
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 18। जनवरी 2019
रायफ बदावीलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्नेछ। अहिले नै!
पिक्सलहेल्पर र लन्डन अफ्रिकी गोस्पेल चोर बेलमार्स जेलको अगाडि जूलियन असन्जेको लागि "केहि भित्री भित्र यति बलियो" प्रदर्शन गरिरहेछन्।
जूलियन असान्जको लागि रानीबाट शाही क्षमा
जुलियन असन्जे र डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एडवर्ड स्नोडेन को माफी
धन्यबाद # विकिलेक्स र स्टेला मोरिसलाई
एन्जेला मर्केलले राजनीतिक शरण र जुलियन असान्जेबाट माफी मागे
हल्का प्रक्षेपण अमेरिकी दूतावास बर्लिन
तपाईंको देशले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ भनेर नसोध्नुहोस्, असान्जको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्, जोन एफ केनेडीको ऐतिहासिक भनाइलाई बर्लिनमा अमेरिकी दूतावासमा प्रकाश पार्छ। इराक युद्धमा मारिएका पत्रकारहरू सम्म हजारौं पीडितको हत्या गर्ने भियतनाम युद्धका अपराधीहरूबाट नियमित रूपमा युद्ध अपराध गर्ने अमेरिकीहरूले उनीहरूको प्रत्यर्पण अनुरोध फिर्ता लिनु पर्छ।
परीक्षणको अर्को दिनको लागि नोट बनाउनुहोस्; 25.02। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्यर्पणको लागि परीक्षण मिति हो।
र सत्यलाई यति लामो समयदेखि गोप्य राखिएको छ र कुनै सरकारले जूलियनको पक्ष लिइरहेको छैन, अ the्ग्रेजी निश्चय पनि अमेरिकीहरूलाई सुम्पिनेछ। त्यसकारण यस महिना हामी विदेशमा रहेका अमेरिकी दूतावासहरू, ह्वाइट हाउस र विदेशका अन्य अमेरिकी भवनहरूलाई हल्का विरोध र कलात्मक गडबडीका साथ सम्बोधन गर्ने छौं।
यसलाई सम्भव बनाउन अहिले नै दान दिनुहोस्, चाहे 3335यूरो वाeयूरो, थोरै रकम सहयोग! भोली जानकारीको गुणस्तर को लागी केहि गर्नुहोस्, यसको आधारमा तपाईले निर्णय लिनु पर्छ!
रानीले जुलियन असन्जेलाई माफी गर्नु पर्दछ
यदि सार्वजनिक मूल्यको साथ गोप्य सन्देशहरू प्राप्त गर्न र प्रसारण एक आपराधिक अपराध भयो भने, प्रेस रिपोर्ट के गर्न सक्दछ र? किनकि के वर्गीकृत गरीन्छ र कुन गोप्य कुरा सरकारले निर्णय गर्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका को शक्ति को दुरुपयोग विरुद्ध #Assange अविश्वसनीय छ: ऊ मृत्युको नजिकै अधिकतम सुरक्षा कारागारमा गम्भीर बिरामी छ। जसले स्काउट बचत गर्दछ उसले स्वतन्त्रता बचाउँछ! स्नोडेन पनि मस्कोमा बस्न जारी छ किनभने सबै पश्चिमी देशहरूले अमेरिकीहरूको बदला लिन डराउँछन्।
@ विकिलेक्स २०१० देखि अमेरिकी प्रशासनको शत्रु भएको छ। हामी यसबाट तुरुन्त रिहाइको मांग गर्दछौं # जुलियान एसेन्ज लन्डनमा उनको कैदबाट। रानीले तुरुन्तै उसलाई माफ गरी राजनीतिक आश्रय दिनु पर्छ।
संयुक्त अधिराज्यको दूतावासमा हल्का प्रक्षेपण
अन्य राजनीतिक बन्दीहरूको लागि पुराना अभियानहरू
राजनैतिक विरोधीहरूको अभियोगको लागि युरोपेली गिरफ्तारी वारंट प्रयोग गर्न सकिँदैन। जर्मन न्यायाधीशसँग स्पेनमा कार्ल्स पुइग्दिममलाई हस्तान्तरण गर्ने राम्रो कारण छैन। आपराधिक कानून घरेलु द्वन्द्वको माध्यम र पुनरुत्थानमा राजनैतिक विरोधीहरूको सतावटको रूपमा पुन: रद्द गरिएको छ। जर्मन न्यायपालिकाले स्पेनमा राजनीतिक बहसमा पक्षपात गर्नुपर्दैन र कम से कम, राजनैतिक रायको दुर्व्यवहारको पीडादायी ऐतिहासिक अनुभवबाट कुनै पनि सुरक्षा प्रदान गर्दैन। यदि उनी बरु अपहरणको साथ सहमत हुन्थे भने, कानूनी विधि खुला छ र कातालान अन्ततः फेडरल संवैधानिक अदालतलाई अपील गर्न सक्छ। हालैमा, व्यक्तिको अधिकार स्पेनमा पावर गेमहरूमा प्राथमिकता दिनु पर्छ।
→ 10 कातालान राजनीतिज्ञहरू जेलमा छन्
1। Jordi Cuixart - 161 दिनको जेलमा
2। जोर्ड सानचेज - 161 दिनको जेलमा
3। Oriol Junqueras - 144 दिन जेलमा
4। जोकिम फर्न - 144 दिनको जेलमा
5। डालोर्स बासा -3दिन अघि दोस्रो पटकको लागि जेलमा छ
6। राल रोमिभा -3दिन अघि पहिलो पटक जेलमा ल्याइयो
7। जर्डी टरुल -3दिन अघि दोस्रो पटकको लागि जेल
8। जोसेप रल -3दिन अघि दोस्रो पटक जेलमा राखिएको छ
9। Carme Forcadell -3दिनमा पहिले कैद गरिएको छ
१०. कार्लस पुइगडेमन्ट - days दिन अघि जेल
→ यसबाहेक, निम्नलिखित राजनेताहरूलाई कारावासको साथ धम्की दिइन्छ र हाल बहिष्कारमा बाँचिरहेका छन्:
1। टोनी कोमिन
2। मेरिटसेल सेरिट
3। मेरिटक्सेल बोरेज
4। क्लारा पुन्ती
5। अन्ना गब्रिएल
6। मार्टो रोवारा
[ग्यालरी_ बैंक प्रकार = "छवि" ढाँचा = "चिनाई" शीर्षक = "सत्य" desc = "गलत" उत्तरदायी = "सत्य" प्रदर्शन = "चयनित" no_of_images = "१″ ″ क्रमबद्ध_बाई =" अनियमित "एनिमेशन_फेक्ट =" बाउन्स "एल्बम_टाइटल =" सत्य "एल्बम_आईडी =" २१ ″]
दबाव र ध्यान प्राप्त गर्नुहोस् - अब हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्! एक दाता को रूप मा, तपाईं सार्वजनिक आक्रोश जगाउन एक अमूल्य योगदान गर्दै हुनुहुन्छ - एक राम्रो संसारको लागि। अब कंक्रीट पाउनुहोस् र एक सीमा क्र्याडेन्ड सम्भव बनाउनुहोस्। हामी कहिँ पनि दान गरीएको हरेक यूरोमा तपाईको विद्रोह र विद्रोह अरु कतै छैन। कृपया हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्: PixelHELPER.org/Spenden वा हाम्रो फेसबुक कोष सra्कलनकर्तालाई समर्थन गर्नुहोस्:
फोटोग्राफर थिच्नुहोस्: डिर्क-मार्टिन हेमिजमनम्यान
लाइट कलाकार: PixelHELPER को सदस्य
बर्लिनको स्ट्यासी जेलमा # प्यूग्डेमन्टका लागि स्वतन्त्रता कवच लगाइएको छ। हामी स्पेनका क्याटालान राजनीतिज्ञहरूको गैरकानुनी, # स्टासी-जस्तो कारावासको विरोधमा प्रदर्शन गर्दैछौं। हामी स्पेनमा सबै राजनैतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दछौं। # पिक्सेलहेल्परले स federal्घीय सरकारलाई तुरून्त घोषणा गर्न भन्यो कि जर्मनीले राजनीतिक रुपमा प्रत्यर्पण स्वीकृत गर्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय म्युचुअल कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनको नियम अनुसार परस्पर कानुनी सहायताका लागि स्पेनिश अनुरोधको त्यस्तो राजनीतिक स्वीकृति आवश्यक छ - अदालतको कानुनी निर्णयको पर्वाह नगरी। मुद्दाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै अनुमोदन प्राधिकरण न्यायमन्त्री कटारिना जौको रूपमा संघीय सरकार हो। हामी संघीय सरकारलाई कार्लस प्विगडेमन्ट जर्मनीको जेलबाट तुरुन्त रिहा हुन सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं!
दबाव र ध्यान प्राप्त गर्नुहोस् - अब हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्! एक दाता को रूप मा, तपाईं सार्वजनिक आक्रोश जगाउन एक अमूल्य योगदान गर्दै हुनुहुन्छ - एक राम्रो संसारको लागि। अब कंक्रीट पाउनुहोस् र एक सीमा क्र्याडेन्ड सम्भव बनाउनुहोस्। हामी कहिँ पनि दान गरीएको हरेक यूरोमा तपाईको विद्रोह र विद्रोह अरु कतै छैन। कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्: पिक्सेलHELPER.org/Spenden वा हाम्रो फेसबुक कोष स support्केतकर्तालाई समर्थन गर्नुहोस्: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
अरब स्प्रिंगले सफलता ल्याउन र लोकतान्त्रिक प्रलोभन सुरु गर्न थालेको थियो। तर ती दिनका विद्रोह अब राजनीतिक कैदीहरू छन्। जो राष्ट्रहरूमा आफ्नै जीवनमा खतरा राख्ने व्यक्तिले आमनेता अन्तर्राष्ट्रियको प्रेस स्वतन्त्रताको स्तरमा कालो लगाइदिए आज जेलमा छन् र विश्वबाट बिर्सिएका छन्। PixelHELPER यहाँ हस्तक्षेप गर्न र राजनीतिक कैदीहरूलाई मुक्त गर्न चाहन्छ।
हाम्रो पहिलो एक्शन मार्च 13 देखि लाइट 2011 मान्छे फिर्ता जेल ल्याउन हो। बहरीन 13 फरवरी, म्यानाना, बहरीन मा 2011 विद्रोह पछि सरकार विरुद्ध विपक्षी आरोप लगाए पछि गिरफ्तार गरियो। धेरै ईश्वर र मानवअधिकारको घट्ना सहित थुप्रै संस्थाहरू र संगठनहरू, अत्याचार गर्न जारी राख्छन्। कैदीहरूलाई देखेर दण्डित गरिएको थियो।
चिन्ता पनि परिवारको लागि रोक्दैन। यी राजनीतिक कैदीहरू अझै जेलमा छन्,5सेवाहरू जीवन जीवनबाट धेरै जीवन वाक्यहरूमा। सबैसँग उनीहरूको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार छ। हामी राम्रो व्यक्तिहरूलाई बिर्सनु हुँदैन जसले लोकतान्त्रिक र शान्तिलाई धेरैको लागी आफ्नै स्वतन्त्रताको बलिदान पुर्यायो।
हामी रायफ बदावी र जूलियन असान्जको लागि लड्छौं! फेब्रुअरी 6th, 2021Oliver Bienkowski
जबरजस्ती मजदुर बहलसेन Oetker एण्ड कं KG मा
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 19। फेब्रुअरी 2018
ब्राउन बिस्कुट - पचाउन गाह्रो
द्वारा #PixelHELPER अनुसन्धान # बुन्डेशार्भ हुनु पर्छ #Wikipedia हंस द्वारा लेख #Bahlsen लेख्न सकिन्छ। उनले १ 1944 .XNUMX सम्म डिप्टी जनरल कमाण्डको डिफेन्सिभ स्टाफमा काम गरे। नाजीहरूको लागि सहयोग थियो #Zwangsarbeiter युक्रेनमा र फैक्टरीहरू #VerenaBahlsen
घटनामा एक उपस्थिति पछि अनलाइन मार्केट रकेट स्टारहरूले यो सुरू गरे। अचानक, बलसनको बिरुद्धको आलोचनाले गहिरो टिप्पणी पायो: हरिष्ठ, जो पारिवारिक व्यवसायको इतिहासको गर्व गर्व गर्दछन्, उनीहरूको भाग्यले नाजी शासनको पीडितहरूको शोषण पनि गर्दछ।
जस्तै तस्वीर-न्युस्पपरासको बारेमा उक्त उत्तराधिकारीले सोधिन्, उनले धेरै सुस्त प्रतिक्रिया देखाई। "यो मेरो कुराको साथ यसलाई संगठित गर्न ठीक छैन," उनले भनिन् - र उनी त्यसबारे थोरै सही हुन सक्छिन्: कसैलाई मात्र यो कुरा गर्न चाहान्छ कि यो उनीहरूको जस्तो लाग्ने हो। अर्थव्यवस्था "एक वाहन" "एक समाजको रूपमा हामीलाई अगाडि बढ्न" हुन सक्छ।
“त्यो मेरो समयअघिको हो र हामीले दास मजदुरहरूलाई जर्मनहरूले जस्तै ज्याला दियौं र उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार ग .्यौं। अदालतले ती दावीहरुलाई खारेज गर्यो। आज बहल्सेनको बिरूद्ध कुनै पनि दावी छैन। "बहल्सेन कुनै कुराको लागि दोषी थिएनन्"।
र त्यो शौचालय मा एक वास्तविक पकडा थियो, जसमा बहरले वास्तवमा यो समयमा आफैले दोष लगाउन सक्छ। यसभन्दा बाहेक ...
मारेको बाध्यता मजदूरले बहरेन बिरुवाबाट। कडा मजदुरहरूको लागी के भयो जुन अब काम गर्न सकेन? तिनीहरू एकाग्रता शिविरमा मारिएका थिए।
[advanced_iframe securitykey=”2850230b9c3d025e1bd1b840e1acbf59859bfed4″ src=”//livepixel.awumedia.de/paypal” width=”100%” height=”300″]
बर्लिनमा होलोकास्ट मेमोरियलमा लाइट प्रोजेक्शन
फोटोग्राफर थिच्नुहोस्: डिर्क-मार्टिन हेनिजमनम्यान
पोस्टर चाहियो: बहालसन बाध्यता श्रमिकहरूलाई एकाग्रता शिविरमा हटाउने बारे जानकारी कसलाई? फोटोग्राफर थिच्नुहोस्: ओलेग रोस्तोभस्सेव
तर त्यसबेला बहरसेनले कुरा गरे। र यो जस्तो लाग्यो:
... कि कम्पनीले कामदारहरूको लागि काम गर्दैन धेरै राम्रो यदि तिनीहरूले पछि लागे भने, व्यवहार गर्न सक्छ ...
... र यो बहलसेनले "कुनै पनि कुराको लागि दोषी छैन" भनेर दावी गर्न हिम्मत छ किनभने एक अदालतले आफ्नो अपराधको लागि सीमितताको विधानका लागि कम्पनी चलाएको छ। अब न्याय गर्न सक्दैन, ...
... यो तपाईंको अतीतसँग सम्झौता गर्न क्रूर रूपमा बेस्सरी छैन? के यसको केहि सा penitent देखाउन Bahlsen खर्च हुनेछ के? बरु, उनले नाजी शासनमा बाध्यता श्रम चलाउने निर्णय गरे।
कम्पनी Bahlsen साप्ताहिक अखबार "डाइ ज़ीट" मा एक प्रतिवेदनका अनुसार उनका बाध्य मजदुरहरूले नाजी युगमा पहिले दावी गरेको भन्दा कम पैसा तिर्नुपरेको हुन सक्छ। उक्त अखबारले १ XNUMX s० को दशकदेखि कुकी निर्माताको वेज कार्डहरूको मूल्यांकन उल्लेख गरेको छ।
कम्पनी हाइरिस भेरेना बहलसेनले हालसालै आफ्ना पुर्खाहरूको नाजी भूत र “बिल्ड” अखबारमा कम्पनी downplayed। "हामीले दासहरू मजदुरहरूलाई पनि जर्मनको जस्तै भुक्तानी गर्थ्यौं र उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्थ्यौं," उनले भनिन्। यस २-वर्षीया उमेरले शब्दहरूको छनौटको लागि माफी मागेकी छ।
पोलिश र युक्रेनी बाध्य मजदुरहरु लाई "Zeit" प्रतिवेदन अनुसार हरेक हप्ता पाँच र दस बीच Reichsmark प्राप्त भएको छ भनिन्छ। कर र सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि - जसबाट यी महिलाले कहिले पनि लाभ उठाएनन् - तर शिविरमा जबरजस्ती आवासको लागि जरिवाना र उच्च लागतका लागि पनि - जम्मा २ w र २ Re बीचमा रहेको रिक्समार्कहरू बीचको कुल तलबको सबैभन्दा ठूलो अंश रोकिएको थियो।
"किन परिवारले बिर्सनु हुँदैन?"
प्रतिवेदनका अनुसार यद्यपि यसलाई जर्मन मजदुरहरूको नाजी युगको भुक्तानीसँग तुलना गर्न सकिदैन, किनकि यो Bad Arolsen मा Arolsen अभिलेखागारको सन्दर्भमा भनिन्थ्यो। एउटा अभिलेख प्रवक्ताले “जीइट” लाई भने: “ऐतिहासिक अनुसन्धानका अनुसार जर्मन कामदारहरूले औसत w 44 वटा रिक्स्कमार्कहरू पाउँछन्।”
बाल्लेसन समूहले यस फरक फरक टिप्पणीलाई अहिलेसम्म यो टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्।
जस्तै SPIEGEL यसको हालको मामिलामा रिपोर्ट गर्दछ, अघिल्लो भन्दा भन्दा नाजी युगको समयमा हनोवरबाट बहरोवर परिवार नाजी शासनमा अझ बढी गहिरो संलग्न थिए। त्यसो भए वरेना बलसनको दादा र एनएसडीएपीमा उहाँका भाइहरू थिए र एसएसलाई पदोन्नति गरेका छन्।
der #Wehrmacht #Keks, को # Krümelmonster #VerenaBahlsen को Bahlsen तपाईंको कम्पनीको शेयरहरूको 40% मा #Konzentrationslager#Auschwitz परित्याग। #OhneMampfkeinKampf & #ohneFeldpostkeineKampfmoralवेर्माष्टको फलामको रासनले घेरा हाल्ने र बिजुली युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा सम्भव तुल्यायो। बहलसेन बिरूद्ध हल्का प्रक्षेपणका लागि दान गर्नुहोस्: paypal@pixelhelper.tv Der #Leibniz वेरना बाल्सनको कम्पनीबाट बिस्कुट यो प्रणालीको भाग थियो र युद्धका लागि निर्णायक। उनको बिना हुनेछ #Stalingrad पहिले समाप्त भयो। कम्पनी बहरले पनि गर्दछन् #Temmlerत्यो #Hitler कोक उत्पादन गरेको छ, विनाशको युद्धको लागि दोषी धेरै #Nazis तेस्रो रीचमा। त्यो बलबले एक पटक जबर्जस्ती मजदुरहरूको लागि 1500 क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरीएको मजाक हो। Bahlsen लेबिनिज Feldpost संग नक्शा प्रदान गरे, प्रथम विश्व युद्ध को समयमा सामने संचार को आधार। #Kriegspropaganda आजको अर्थ #Reklamekunst #DasOriginal# Nurechtmit52Zähnen #Vernichtungslager #eiserneRation #Hannover#Kriegstreiber जब मित्र विस्फोट बाध्य श्रमिक सिर्फ एक आश्रय काठ बनेको अपेक्षा थियो महिला, असल सज्जनहरु raids #Bahlsen तपाईंको कर्मचारीहरूको लागि पनि पनि थिएन #Bunker बनाए। यहाँ एक को गलत संस्कृत पूंजीवादी छवि को दर्शाता छ #Nazi अनुयायी परिवार। त्यस्ता परिवारहरू मार्फत मात्र नाजीहरूले आफ्नो बिरामी प्रणाली जोगाउन सके। हामी श्रीमती बहल्सेनलाई देखाउनुहोस् कि हामीले उसलाई क्षमा दियौं। तर तपाईंले आफ्नो शेयरको %०% दान # Auschwitz लाई दिनु पर्छ। तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुहोस् - तपाई यहाँ फेसबुकमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ: https://web.facebook.com/verena.bahlsen & इन्स्टाग्राम @verenabahlsen
Oetker, Bahlsen & Co अपग्रेड गर्दै
बन्डेसवेहर आईएसआईसँग लड्न सिरियातिर जान्छ र विश्व क्रिसमसको बजारमा आतंककारी हमलाहरूको डरलाग्दो छ, जर्मनीको समृद्ध आर्मेन्ट कम्पनीहरुमा लगानी गर्दैछ। हाल, डा। आईएनजीको केहि शेयरधारक। अगस्ट ओटिकर केजी ESG इलेक्ट्रोनिक्ससिस्टम- und Logistik GmbH को अधिग्रहण मा शामिल छ, जसको व्यापार क्षेत्र जर्मन लड़ाकू जेट शामिल हो। सुरक्षा उद्योग कहिलेकाहीं एक कठिन लगानी क्षेत्र हो। यद्यपि बजारमा कम्तिमा धेरै हतियार निर्यात र बंडेसवेर अपरेसनले सुरक्षित राख्ने सम्भावना छ, तर सुरक्षा व्यवसायमा पनि रक्तचाप धेरै मात्रामा छ।
मध्ययुद्धलाई उजागर गर्न लाइट कला प्रयोग गर्नुहोस्
पिक्सेलहेलरले आफैलाई शान्तमा लक्ष्य बनायो एडभेन्सन सेन्सन परिवार ओटिकरको यो लगानीलाई इंगित गर्न। त्यसो कि क्रिसमसको ककुलका लागि सामग्रीहरू खरीद गर्दा क्रिसमस भन्दा पूर्व समयको हलचलमा यो सानो शान्त सन्देश तल जान्छ, बिएनकेओस्कीले विभिन्न आन्दोलन सुरु गरेको छ। उदाहरणका लागि, लाइट कलाकारले डा। बिरुद्ध रूप मा ओकेटर लोगो र डा। मेड को कम्पनी मुखौटा मा हस्ताक्षर "Kanonenfutter"। ओसेटर बिईलेफेल्ड मा। बिएलेफेल्डको राति आकाशमा यो थोपा थप हल्का हुन सक्छ, जसले उत्सव रूपमा सजाय गरिएको सडकोंलाई उजागर गर्यो, तर यहाँ यो मीडिया ध्यानको बारेमा अधिक छ। र वास्तवमा यस अर्थमा बिएनकेओस्की युट्युबमा प्रसिद्ध ज्ञात स्लिङ्गट च्यानलमा परीक्षण गरिएको हो जोर्र्ग स्प्रिड एक घरको पछाडिको तोपको साथ।
एक निजी मामला को रूप मा युद्ध
अनि यो सबै ट्रिगरहरूले यो ट्रिगर गर्नुभयो? सबै पछि, त्यहाँ बीचमा बिएफेल्ड कम्पनीको आधिकारिक बयान थियो। "लगानी दुई परिवारका सदस्यहरु को एक निजी मामला हो र यस कम्पनी संग केहि गर्न को लागी छैन। ओइट्कर ", नेई वेस्टफ्लास्सेच Zeitung को एक अखबार रिपोर्ट को अनुसार। र यसैले बीनकोस्कीले पारिवारिक ओट्कर विरुद्ध अर्को हड्ताललाई आफ्नो अन्तस्करणमा पुग्न लाए। यो डा। मेड को एक कम्पनी को मालिक हो कि प्रश्न। ओकरर आर्मामेंट्स व्यवसायमा संलग्न छ, यो समय चिनजान केटाहरू चाइर गरेर मीठो र बिल्कुल बेकार थिए।
के तपाइँको जमेको पिज्जा भन्दा ठुलो महसुस गर्न सक्छ?
यो कसरी रल्फ जक्कोवस्कीको ब्याच "डे डे विवेन्याट्सब्रेरेरी" चाँडै नै सामाजिक रूपमा "आर्क्स बेकरीमा" बने। छोराछोरी ओटिकर परिवारलाई सोध्छन्: "नैतिकता कहाँ छ?" यो क्रिया हिट बर्लिन हिप हप कलाकार भोकोमाटरडोर संग एक साथ प्रस्तुत गरिएको छ। तर केवल भोक प्रविधी र सामग्रीको सन्दर्भमा, उपस्थिति धेरै प्रस्ताव गर्न को लागि छ, मचान सच छ। एक 1,45 मीटर लामो काठको बक्सको सामने सुँग मास्क संग। यो अपमानजनक पृष्ठभूमिमा, कम से कम रिचर्ड ओटिकरले आर्मामेंट व्यवसायको आनन्द हटाउनुपर्दछ। सबै पछि, यो अन्त 1976 यस्तो बक्स मा अपहरण गरियो र कैदी पकडिएको थियो। हाइजरका साथ सुँगुरको मुखौटा थियो। के काम बेकार छ? निश्चित रूपमा। तर कति तयार मिश्रणहरू तपाईंलाई आफ्नो आफ्नै भूतलाई बिर्सनु र बाह्य सौन्दर्य सौदोंमा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ जसको उत्पादनले तपाईले लगभग 40 वर्ष पहिले नै मारेको छ?
कार्य पुकारा एक सहयोग मा अनुमान साउदी अरब पिक्सेल सहयोगी गर्न ट्यांक निर्यात को एक तत्काल रोक को लागि - हतियार व्यापार, को "धन्यवाद साउदी अरब कुनै ट्यांक" संघीय Chancellery र साउदी अरब को दूतावास मा शब्द रोक्नुहोस्।
यो सउदी जर्मन हतियार कम्पनीहरु को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्राहकहरु बीचमा अझै पनि छन्। पहिलो आधा मा 2015 हतियार निर्यात लगभग 180 लाख साउदी अरब गर्न यूरो लायक स्वीकृत गरिएको छ - ब्रिटेन र इजरायल संग पनि अधिक व्यापक व्यापार थिए।
जर्मनी आर्मी निर्यातमा युरोपियन च्याम्पियन हो। विश्वभरि, यो अमेरिका र रूस पछि तेस्रो ठाउँ लाग्छ। संघीय सरकारको अनुमोदन संग, जर्मन हतियार र हतियारहरु पनि तानाशाहहरुलाई र सऊदी अरब जस्तै अधिवेशनवादी शासन को आपूर्ति गर्दछ। त्यो यो जस्तो गर्न सक्दैन। हामी मृत्युको साथ व्यापारको अन्त्य गर्न चाहन्छौं।
जबरजस्ती मजदुर बहलसेन Oetker एण्ड कं KG मा अप्रिल 21st, 2020Oliver Bienkowski
07 अप्रिल 2016
चीन / मानव अधिकारमा अइगर्सको मुस्लिमको लागि अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 7। अप्रिल 2016
पिक्सेलहेल्परले उइघुर, ह Kongक Kong, ताइवान र तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दछ
उइगुरहरुलाई खाली गर्नुहोस्
माराकेचमा उइघुर स्मारक
Aजुलाई २,, २०१ 29.07.2019 मा हामी # मारकेकमा हाम्रो उइगुर स्मारकको पहिलो भिडियो प्रकाशित गर्छौं, हामीले के गरेका थियौं अरब अखबारमा लेख्यौं र जवाफ नभए पछि मात्र हामीले त्यो अखबारलाई बतायौं कि स्मारकको पहिलो प row्क्ति समलिंगी यहूदीहरूको लागि बाँकी छ मोरक्कनको इतिहासमा "माराकेचको होलोकास्ट मेमोरियल" को रूपमा स्मारक। मुस्लिम उइगुरसँग एकताको बिरूद्ध घृणा। आजसम्म, विश्वका कुनै पनि मुस्लिम देशले युगर्सलाई उनीहरूको चाहना भएसम्म समर्थन गर्दैन। आशा छ कि १०० बर्षमा उइगुर मुस्लिम तुर्की जनताका लागि पहिलो स्मारक विगर्ससँगको मुस्लिम देशहरूको ऐक्यबद्धताको महत्वपूर्ण मोड हुनेछ।
हामी सबै मिलेर चीनलाई अन्य देशहरूको विनाश गर्ने प्रत्येक भवनलाई पुनःनिर्माण गर्न चाहन्छौं र चीनलाई युगुर संस्कृति बिगार्न नदेओ भन्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित राज्यमा छोड्ने छौं।
यदि चिनियाँहरूले १,००० गिर्जाघर भत्काउँछन् भने युरोपमा ठूलो क्रोध देखा पर्ने थियो। क्याथोड किरणको आगोले यहाँ विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जगाउन सक्छ। चीनमा १००० मस्जिद र क्रिश्चियन गिर्जाघरहरू पहिले नै ध्वस्त भइसकेका छन्। हामीले विश्वभरका उत्पीडित मुसलमान जनताका लागि एकजुटता सिर्जना गर्नका लागि सबै युगुरहरुलाई विदेशमा सटीक प्रतिलिपिको रूपमा पुनर्निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छौं। दुर्भाग्यवस, अधिकांश युगुरहरू भागिरहेका छन् वा चिनियाँ पुन: शिक्षा शिविरमा छन् र निराश्रित छन्। यसैले हामीले एउटा GoFundme कोष स्थापना गरे। हामी कति संकलनमा निर्भर गर्दछौं, हामी या त पुस्तकालय, मस्जिद वा चिहान बनाउँछौं।
चीनले3बर्षमा १००० भन्दा बढी मस्जिदहरू, चिहानहरू र मन्दिरहरू नष्ट गरेको छ। बेइजि्गले मुस्लिम यूगर्सको संस्कृति र धर्मलाई व्यवस्थित ढंगले नष्ट गर्दछ। स्याटेलाइट छविहरूले एक डरलाग्दो तस्वीर देखाउँदछ। पिक्सलहेल्परले उदाहरण बसाल्नेछ र मोरक्कनको पहाडमा नष्ट गरिएको इमान असिम चिहान पुनर्निर्माण गर्नेछ जुन चिनियाँहरूले विनाशको सम्झना गरी पट्टिको साथ गर्दछ। परियोजना को बारे मा अधिक जानकारी
हामी चीनमा प्रजातन्त्रको माग गर्दछौं। र युगर्स, ह Hongक Kong, ताइवान र तिब्बतको लागि आफ्नै देशहरू। कम्युनिष्ट पार्टी तुरुन्त विघटन हुनु पर्छ। लाइट प्रक्षेपण ढुकुर
हामी चीनमा धर्मको स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको सम्मान र राम्रो भविष्यको लागि प्रजातान्त्रिक चुनावको माग गर्दछौं। सबै मस्जिदहरू चीनको खर्चमा पुन: निर्माण गर्नुपर्दछ, ती सबै #Uiguren तपाईं आफ्नो विश्वास अभ्यास गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
जब पनि युरोपेली झरना, उजुरीमा एक उचाइ गुफाहरू। चीनमा, इस्लामलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ, दायाँ-पखेटा बेवकूफहरूको लागि सपना। 200 मस्जिदहरू ध्वस्त भएको थियो, चिनियाँ garnix बारे जान्न चाहन्छु। Uighurs लक, र मुट्ठी मा हँसिलो। चीनमा अल्लाहमा विश्वास गर्ने जो कोहीले, बच्चाहरूलाई निद्राबाट लुटे।
र त्यसपछि सबै मुसलमानहरू गएका छन्, जिया Jinping भन्छन् कि धेरै राम्रो थियो। किनकी सबै राज्यों देखेको छ, तर चीनको पैसा तपाईं हुन सक्छ। तर त्यसोभए तपाईं पनि दूर, जस्तो जस्तो देखिन्छ, Uigure गंदगीमा छ। एक कुरन एकाग्रता शिविर आक्रोश सीजन टिकट को लागि टिकट हो।
Uyghurs मस्तिष्क लुकाउनु, मोहम्मदले अनुमति दिँदैन। चीनको पर्खालको सवारी र प्रतीक्षामा, प्रतीक्षामा। उनको सवारहरू हांगकांग, तिब्बत र मा र मा पठाउँछन्। सबै मुसलमानहरू पछाडी फर्किए र जिया जिनङले पप गरे। चीनमा त्यहाँ लोकतान्त्रिक हो र फेरि इस्लामफोबिया।
पुन: शिक्षा शिविर र नजिकको निगरानीको माध्यमबाट, चीनको केन्द्रीय सरकारले प्रांतमा अशांतिलाई रोक्न खोजेको छ। यस्तो सुविधाको अस्तित्व आधिकारिक रूपमा अक्टोबर 2018 मा सरकार द्वारा पुष्टि गरिएको थियो, तर एकै समयमा त्यहाँ त्यहाँ दुर्व्यवहारको यी आरोपहरू इन्कार गरे।
सिन्जिङका चिनियाँ प्रांतको एक मुस्लिम तुर्कवोलकी युगर्सका लागि, हाल धेरै वर्षहरूमा परिवर्तन भएको छ (22.09.2013 बाट फोटो, काशगढीमा एक ध्वस्त मस्जिदको खण्ड)। तर बेइजिङमा राजनैतिक नेतृत्वले पनि जनताको गणराज्यको पश्चिममा सबैभन्दा ठूलो प्राणीलाई पकड्न पाएन।
सिङ्मिङमा चिनियाँ राजनीति बौद्ध तिब्बतका लागि समान छन्: जातीय चिनियाँ र तिनीहरूका कम्पनीहरू लक्षित छन्। यो पनि हो कि वे मुख्य रूप देखि सरकार को बुनियादी ढांचे को कार्यक्रम र निवेश देखि लाभ उठाते हो। विद्यालयहरूमा, स्थानीय भाषा मोर Mandarin द्वारा अधिक त्यसैले उजुरीहरू उनीहरूको पहिचान कायम राख्न धर्मबाट भागिरहेका छन्। अधिक सरकार इस्लाम को दमन गर्दछ, यो अधिक कट्टरपंथी यो हुन्छ।
हामी सबै युघुर र परिचयको तत्काल रिलीजको माग गर्दछौं
चीनमा धर्मको स्वतन्त्रता। उडान उडान स्पेगेटी राक्षस वा विश्व धर्म मध्ये कुनै एकमा सबैले आफूले चाहेको कुरा विश्वास गर्न सक्दछन्। चीनले आफ्ना जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट रोक्नु पर्छ। धर्मको स्वतन्त्रता जर्मन संविधानको अंश हो - चिनियाँ संविधानले यसलाई उदाहरणको रूपमा लिनुपर्दछ।
चीन / मानव अधिकारमा अइगर्सको मुस्लिमको लागि अभियान फेब्रुअरी 24th, 2021Oliver Bienkowski
20 अप्रिल 2014
हामी बुन्टेस्नाक्रिश्चेन्डिएन्स्ट हो - अधिक प्रजातान्त्रिक सहभागिताको लागि
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 20। अप्रिल 2014
बुन्टेस्नाक्रिटेन्डिएन्स्टले यूरोपभरि प्रमुख प्रणालीगत परिवर्तनको लागि काम गरिरहेका कार्यकर्ताहरू र तल्लो तहका आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछ। विश्वभरका कलाकार र उद्यमीहरू रंगीन बुद्धिमत्ता सेवालाई कारागारबाट स्वतन्त्र कार्यकर्ताहरूलाई निधि दिन्छन्, व्हिसललब्लावर्सलाई मद्दत गर्दछन् र विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको पर्दाफाश गर्दछन्। हामी गुप्त रूपमा कार्य गर्दछौं र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ। हामी कलाको अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा भर पर्दछौं।
अब आवेदन गर्नुहोस् - अधिक र colorful्गीन संसारको लागि!
समाचारहरू देखा पर्दछ र हरेक सेकेन्डमा विश्वभर फैलन्छ। केही समाचार पछि, संसार पहिले भन्दा फरक तरिकाले बदलिएको जस्तो देखिन्छ। समाचारले हाम्रो जीवनलाई असर गर्छ। हामी तपाईंसँग उठ्दछौं र तपाईंलाई रातमा लैजान्छौं। जे भए पनि संसारमा जहाँसुकै समयमा पनि, पुतलीले आफ्नो पखेटा पल्टाउँदछ। र केहि उठ्न सक्छ जुन हाम्रो लागी एक अर्थ छ। आधुनिक प्रविधिहरूले विश्वलाई सानो बनाएको छ। तर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढिरहेको देखिन्छ। धेरैले तपाईलाई कसमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छक्क पर्दछन्। कुन जानकारी अझै विश्वसनीय छ र जर्मनीमा शान्ति र समृद्धि जारी छ कि छैन। यो त्यहि हो जहाँ हाम्रो मिशन सुरु हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा हामी भरपर्दो आधारशिलाहरू सिर्जना गर्दछौं, कहिलेकाँही उच्च जोखिममा, किनकि यो उत्तरदायी रूपमा कार्य गर्न हातको लम्बाई लिन्छ। इन्टिजर र वफादारीपूर्वक मानिसहरूलाई जर्मनी रक्षा गर्न प्रतिबद्ध।
टेड निगरानीको बिरूद्ध
निगरानी राज्य: "घर मा एनएसए"
संयुक्त अमेरिका को संयुक्त राज्य बर्लिनमा अमेरिकी दूतावास र जर्मनीका डसेलडोर्फ, फ्रान्कफर्ट र ह्याम्बर्ग लगायत अन्य अमेरिकी दूतावासहरूको भित्तामा उभिएका थिए। यसको कारण एनएसए र अमेरिकी गोप्य सेवामा निर्लज्ज जासुसी हो।
एनएसए आतंकवाद विरुद्ध लड्न आवश्यक रूपमा आफ्नो निगरानी रणनीतिको रक्षा गर्दछ। यसबाहेक, यसले यसो भन्छ, "यदि तपाईंसँग लुकेको छैन भने, तपाईंसँग डर नगर्ने"। दुर्भाग्यवश, एनएसए को निगरानी आतंक को विरुद्ध लडाई को मामला मा अधिक जान्छ। तपाईंको टेलिफोन, स्काइप, व्हाट्सएप कललाई निरीक्षण गर्न सकिन्छ, तापनि तपाईं आतंकवादीहरू संग "3rd डिग्री मित्र" सिद्धान्त प्रयोग गरेर केहि गर्न सक्नुहुन्न।
यसको अतिरिक्त, यी निगरानी प्रविधिले मात्र4आक्रमणहरू रोकेको छ। के यो एक स्पष्ट, अचम्मनी सुरक्षा को लागि हाम्रो गोपनीयता को लायक छ? PixelHELPER यसमा विश्वास गर्दैन, किनकि हामीले यो अभियान सुरु गर्यौं।
13 प्रकाश प्रक्षेपण पछि पहिलो सफलता, साप्ताहिक ताल र ठूलो मिडिया कवरेजमा:
जर्मनीको शीर्ष सीआईए मैन मालिकको प्रस्थान.
हामी बुन्टेस्नाक्रिश्चेन्डिएन्स्ट हो - अधिक प्रजातान्त्रिक सहभागिताको लागि जुन 15th, 2020Oliver Bienkowski
25 2013 सक्छ
इन्द्रेणीबाट - लाइट आर्ट कनेक्टिंग ब्रिजहरू
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 25। मई 2013
कल्पना इंद्रधनुष माथि एक सन्तुलन कार्य हो।
बुधबार साँझको इंद्रधनुषको अनन्त लाइट शहरमा डसेलडोर्फ शहर हॉलबाट हल्लायो।
"इंद्रधनुषबाट" अभियान PixelHELPER अधिक सहनशीलता र घृणाको खण्ड हो।
इन्द्रेणीले आशा र पूर्णताको प्रतीक हो। जब व्यक्तिले इन्द्रेणी देख्छन्, एउटा चीज निश्चितको लागि हुन्छः अन्धकार र वर्षाको अन्तिम शब्द हुँदैन।
ओलिभर बिएनकोव्स्की द्वारा लाईट आर्ट प्रोजेक्ट "रेनबोबाट" चलिरहेको प्रोजेक्ट हो जसमा प्रसिद्ध पुलहरू, भवनहरू र शहरी वास्तुकलाहरू तथाकथित इन्द्रेणी पुलहरूमा परिणत भइरहेका छन्। हालसम्म डसेल्डोर्फको मेडिनिहाफेनको बन्दर पुलको अलावा कास्सेलको कार्ल ब्रानर ब्रिज पनि पुनः डिजाइन गरिएको छ। यस प्रोजेक्टले कागजातमा व्यक्तिहरूलाई विभाजित गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय कला आगन्तुकहरूको लागि एक मजबूत पुल विकास गर्‍यो। ब्रानडेनबर्ग गेट लाईट्स फेस्टिवलको लागि इन्द्रेणीमा पनि परिणत भएको थियो। युनेस्कोको विश्व धरोहर स्थलको भाग कसेडेल माउन्टेन पार्क कास्काडेन पनि इन्द्रेणीमा रंगीएको छ। यससँग कलाकारले अधिक सहनशीलता र घृणाको विरूद्ध वकालत गर्दछ।
इन्द्रेणीबाट - लाइट आर्ट कनेक्टिंग ब्रिजहरू मई 6th, 2020Oliver Bienkowski
16 जनवरी 2013
Vogelschiss gegen हास - घृणा मेल गर्नेहरूका लागि रातो कार्ड
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 16। जनवरी 2013
आज फिर्ता, विरुद्ध # घृणा नेटमा अब एक छ विषको असर रोक्ने औषघि। @PixelHELPER घृणा फैलाउने सबैलाई बर्ड ड्रपिंगहरू पठाउँदछ। Paypal@PixelHELPER.tv लाई दान गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् कि अर्को डेलिभरी कसले पाउने छ। पत्र १ मा जान्छ _donalphonso बाट @ विश्व
कला स्थापना को नैतिक छाया मा #Fencing4Humanity, यूरोपियन बाह्य सीमाको प्रतिकृति, पहिलो चराहरू बसोबास गरे। यहाँबाट अब छ # बर्ड चिट विरुद्ध # घृणा इन्टरनेट मा लडे।
मोरक्कोमा Vogelschiss सुविधा
टाढा मोरक्कोमा, हामी हाल # HateSpeech को साथ प्रोफाइल बनाउने मानिसहरूलाई स symbol्केतात्मक भोगलचिस खामहरू पठाउन हाम्रो भोगल्सचिस सुविधा निर्माण गर्दैछौं।
चराहरूले हाम्रो बोट राम्रोसँग लिन्छन्
घृणा विरुद्ध काम गर्ने चरा
हाम्रो पक्षी छिटो सुविधा को निर्माण
Vogelschiss gegen हास - घृणा मेल गर्नेहरूका लागि रातो कार्ड जुन 15th, 2020Oliver Bienkowski
10 फरवरी 2012
धार्मिक व्यंग्य तथा कला को स्वतन्त्रता को साम्युयलपाटी संग्रहालय
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 10। फेब्रुअरी 2012
श्याम्युअल पाटीले धार्मिक व्यati्ग्य र कला स्वतन्त्रताको संग्रहालयको निर्माणको लागि कल
शमूएल पाटीको हत्यालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। कला फेरि कहिले पनि आतंककारीहरुको कारण अन्य मानिसहरुलाई मार्नु हुँदैन। कलात्मक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दा माथि छ। हामी सम्पूर्ण युरोपभरि स्कूल कक्षालाई आम व्यंग्यको प्रदर्शनीमा जान आमन्त्रित गर्दछौं। कलात्मक स्वतन्त्रताको लागि आधुनिक सर्कस जस्तै हामी केही यूरोपभरि धार्मिक व्यंग्यको इतिहासमा पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई तपाइँको मद्दत चाहिन्छ ताकि हामी समुद्रका कन्टेनरहरू हाम्रा प्रदर्शनीहरूसँग किन्न र सुसज्जित गर्न सक्दछौं। शब्द र छविहरूको स्वतन्त्रताको लागि सबै यूरोप सँगै खडा हुनुपर्दछ। कृपया हाम्रो अभियान सबै युरोपेली देशहरूमा सबै मित्रहरूलाई फर्वार्ड गर्नुहोस् ताकि हामी कलात्मक स्वतन्त्रताको लागि मोबाइल प्रदर्शनीको साथ चाँडै सुरु गर्न सक्दछौं। जो कोही दान गर्छ उनीहरू संग धार्मिक व्यंग्य को लागी भविष्य पप अप संग्रहालय को लागी नि: शुल्क आजीवन प्रवेश छ।
हामी मोबाइल पपअप संग्रहालयको साथ सबै यूरोपीय देशहरूमा यात्रा गर्नेछौं।
मोरक्कोको हाम्रो होलोकास्ट स्मारक भत्काइएको थियो, सीएनएनले रिपोर्ट गर्यो
CNN मोरोक्को मा हाम्रो परियोजना को बारे मा
धार्मिक व्यंग्य तथा कला को स्वतन्त्रता को साम्युयलपाटी संग्रहालय फेब्रुअरी 24th, 2021Oliver Bienkowski
17 जनवरी 2012
प्रोक्सी द्वारा लोरेली क्लिनिक बचत गर्न नागरिकहरूको निवेदन
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 17। जनवरी 2012
जनमत संग्रहको माध्यमबाट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बिरूद्धको लडाईको तलको उदाहरण हो। हाम्रो अपरेटर अवधारणा जाँच गर्नुको सट्टा, राजनीतिज्ञहरू सबै नागरिकहरूमा हाम्रो नागरिकहरूको अनुरोधको बिरूद्ध दौडिरहेका छन्, जसले हामीलाई देखाउँदछ कि हामी सही मार्गमा छौं। जबसम्म कुनै प्रशासनिक अदालतले निर्णय गर्दैन तबसम्म हाम्रा नागरिकहरूको निवेदन नगरपालिका कोडको १§ under १ under अन्तर्गत अस्वीकार्य हुँदैन। आज, अफिसियल जर्नल पनि मुड निर्माणको लागि दुरुपयोग भएको छ। हामी अब एक काउन्टर सूचना अनुरोध गरिरहेका छौं।
लोरेली अस्पताललाई बन्द गर्न चाहने राजनीतिज्ञहरूले मानहानि गर्ने विधिहरूको साथ काम गर्छन् जुन अन्यथा केवल निरंकुश देशहरूमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। सहर र नगरपालिकाको संघ अदालतमा उठ्छ र उनीहरूको राय नागरिकलाई प्रशासनिक अदालतको फैसला जस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। केही नागरिकले पुरानो नागरिकको पहल "लोरेली क्लिनिकको संरक्षणका लागि" प्रदर्शनमा चन्दा माग गरेका छन्, व्यक्तिगत कम्पनीहरूले अस्पताल सहयोग संघलाई १०,००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी चन्दा दिएका छन्। हामीलाई चन्दामा ० डलर प्राप्त भयो र नागरिकहरूको लागि हाम्रो निवेदनको आलोचना भयो किनभने हामी मेहर डेमोक्रेट ई सिफारिसहरू अनुसरण गर्दैछौं। V. पानामा हाम्रो चन्दा खाता नम्बर लेखेको छ।
लोरेली क्लिनिक बचत गर्न अन्तिम मौका भनेको प्रत्येकaसाझेदार शहरहरूमा नागरिकहरूको अनुरोध हो। जो कोही सम्बन्धित शहर मा आफ्नो पहिलो निवास छ र १3बर्ष भन्दा माथिको हुन सक्छ। कृपया कागजात तपाईंको क्षेत्रमा विस्तृत रूपमा वितरण गर्नुहोस्।
Oberwesel, सेन्ट Goar र Hunsrück-Mittelrhein सम्बन्ध बीच छनौट गर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
पिक्सलहेल्पर फाउन्डेसनको नयाँ अपरेटर अवधारणाको साथ, हामी लोरेले क्लिनिकहरूलाई सुरक्षित भविष्यमा अग्रसर गर्दैछौं!
Oberwesel को शहर को लागी नागरिकको अनुरोध
हस्ताक्षर टेम्पलेट डाउनलोड गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सँधै अपरेटर अवधारणासँगै वितरित गर्नुपर्दछ।
नागरिकहरु Sankt Goar को शहर को लागी अनुरोध
Hunsrück-Mittelrhein समुदायको लागि नागरिकहरूको याचिका
Loreley क्लिनिकहरू बचत गर्नुहोस्। पिक्सलहेल्पर फाउन्डेसन गैर-नाफा GmbH अस्पताल लिन चाहन्छ र यसलाई १-घर समाधानको रूपमा चलाउन चाहन्छ। बर्लिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हल्का प्रक्षेपण
वर्तमान स्थिति ०//२०/२०२० २१:१:20.04.2020
हालको कम्पासमा अप्रिल २०२० को CDU Oberwesel मा केही गलत दाबी गरिएको छ, अर्थात् क्लिनिक नाफा नकमाउने छ।
Krankenhaus GmbH सेन्ट Goar-Oberwesel, नामले संकेत गरे जस्तै, एक GmbH हो र नाफा नकमाउने GmbH हो। यो केवल केहि करबाट छुट छ तर परोपकारी होइन। सारांश मा, यो ध्यान दिनु पर्छ कि व्यापार कर बाट छुट, the
बिक्री कर र सम्पत्ति कर hospitals 67 एओको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सबै अस्पतालहरूलाई प्रदान गरिन्छ। यो बेवास्ता गरिएको छ कि अस्पताल नाफामुखी छ कि छैन। निगम करबाट छुट केवल hospitals -१-51 एओ को अर्थ भित्र गैर नाफामुखी भएका अस्पतालहरुलाई मात्र दिइन्छ। यस समयमा यो GmbH हो र पैसा फिर्ता गर्न सबै सम्भावनाहरू सहित। विभागहरू बन्द थिए र अस्पताल प्रविधि अन्य अस्पतालहरूमा सारियो। एक नाफा नाफा GmbH मा रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। क्लिनिकहरूको नाफा नकमाउने कार्य जारी राख्न नागरिकहरूको अनुरोधलाई सहयोग पुर्‍याउनुहोस् facebook.com/loreley-klinik एक नाफा नकमाउने सीमित देयता कम्पनी संग, सीमित देयता कम्पनी संरचना भन्दा भन्दा अधिक रकम उपलब्ध छ, कुनै नाफा अब प्रवाह गर्न सक्दैन, तर नयाँ गैर नाफामुखी अस्पतालको नाफा नकमाउने उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिनु पर्छ। हाम्रो मामलामा त्यो क्लिनिक आफैंमा हुनेछ, वरिष्ठ गोरखा र विकेडका लागि नयाँ वर्कशप गोन्टको पुरानो स्थानमा। अधिक जानकारीको लागि, केवल यस पृष्ठमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
वर्तमान स्थिति ०//१//२०२० १२:००
नयाँ "असाधारण शेयरधारकहरूको बैठक" प्राप्त गर्न हामी शेयरधारकहरूको शहरहरूमा तीनवटा याचिकाहरू सुरू गर्दछौं। मारिएनहास होल्डिंग जीएमबीएचले अस्पतालमा तपाईंको% shares% शेयरहरू पिक्सेल हेल्पर फाउन्डेसन गैर-नाफा जीएमबीएचमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दछ, जसरी तपाईंले रेड क्रसलाई प्रस्ताव गर्नुभयो।
थप रूपमा, भविष्यमा कम्पनीमा सबै नाफा राख्न र शेयरधारकहरूलाई वितरण नगर्न अस्पताल एक नाफा नकमाउने कम्पनीमा परिणत हुनुपर्दछ। यो गर्न हामीले स्थानको पार्टनर प्रति मतदाताबाट करीव 300०० हस्ताक्षरहरू संकलन गर्नुपर्नेछ, यदि सम्बन्धित शहर प्रशासनले नागरिकको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेन भने नागरिकको निर्णय हुन्छ।
पिक्सेलहेलर फाउन्डेसन गैर-नाफा GmbH ले Oberwesel मा क्लिनिक मर्मत र निरन्तरताको लागि एक अवधारणा र प्रस्ताव विकसित गर्‍यो। समावेशमा विशेष फोकसको साथ प्रस्तावहरू गोन्ट गोर स्थानमा सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसले -8-१-16 व्यक्तिको लागि बस्ने नयाँ रूपहरू, साथै अशक्त मानिसहरूका लागि सम्बद्ध कार्यशाला समावेश गर्दछ।
Oberwesel को अस्पताल पनि पूर्ण अस्पतालको रूपमा संचालन गर्न गहन हेरचाह इकाई जस्ता सबै आवश्यक विशेषज्ञ विभागहरू पुन: सक्रिय गर्नु पर्छ।
मारबर्ग विश्वविद्यालय र नजिकैको मेडिकल टेक्नोलोजी कम्पनीहरूसँगको सहकार्य र सहयोगमा अशक्तहरूका लागि कार्यशालाले प्रासंगिक र प्रमाणित काठका मेडिकल अवयवहरू उत्पादन गर्दछ जुन अफ्रिकामा निर्यातको लागि प्रयोग गरिने छ।
अवरोधका लागि अवरोधमुक्त जीवनशैली सहित नयाँ कार्यशालाको निर्माणका लागि, tion००,००० सम्मको रकम एक्क्शन मन्सेबाट आवेदन गरिनु पर्छ।
पिक्सलहेल्पर फाउण्डेशन प्रभावकारी ढंगले प्रदर्शन गर्न चाहन्छ जुन कसरी एक वृद्ध समाजको आवश्यकताहरू देशको आधुनिक र भविष्य उन्मुख तरिकामा पूरा गर्न सकिन्छ।
वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पिक्सेल हेल्पर फाउन्डेसनले एक नाफामुखी अस्पतालको रुपमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नयाँ नाफा क्षेत्र खोल्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। हामी पनि अस्पताल संरचना कोषबाट क्लिनिक सञ्चालन जारी राख्न को लागी रकमको आशा गर्छौं र विस्तार गर्नुहोस्।
यहाँ, पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेसन, यसको समर्थकहरू मार्फत, जर्मन स्वास्थ्य नीतिमा एक प्रख्यात नेटवर्कमा फिर्ता जान सक्छ।
एक नाफा नकमाउने सीमित देयता कम्पनीले आफ्नै लाभको चासो लिन गर्दैन, सेयरधारकहरूलाई कुनै नाफा वितरण हुँदैन, हामी क्लिनिक र अशक्त कार्यशालामा कुनै पनि अधिशेष लगानी गर्दछौं।
एक नाफा नकमाउने अस्पतालको फोकस सँधै साधारण राम्रोमा हुन्छ - व्यक्तिगत बिरामीको भलाईको पर्यायवाची। "गैर मुनाफा" शब्द कर कानूनका लागि प्रासंगिक छ, किनभने केवल सर्वसाधारणलाई सेवा गर्ने कर संहिताको अनुच्छेद in२ मा सूचीबद्ध गतिविधिहरू कर कानूनको अर्थमा नाफामुखी ठानिन्छ - उदाहरणका लागि, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुदानको चिन्ताको विषय बनाएको छ। गैर-नाफा GmbH (gGmbH) कर्पोरेट करबाट छुट छ , बदलामा, gGmbH गैर-नाफा को उद्देश्य को लागी उत्पन्न कोषहरु को उपयोग गर्न बाध्य छ।
त्यसैले हामी एक नाफा नकमाउने विशेषज्ञ क्लिनिक बन्न चाहन्छौं - र त्यस हिसाबले कार्य गर्दछौं। यसले हामीलाई लचिलोपन प्रदान गर्दछ, जसले परिणाम स्वरूप बिरामीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। किनकी हामी केवल भर्खरको मापदण्डहरूको पालनामा अत्यन्त सक्षम तरिकाले कार्य गर्दैनौं, तर मानवीय, गुणात्मक र आर्थिक सिद्धान्तहरूको अनुसार पनि - यसको मतलब यो हो कि हामी हाम्रो बिरामीहरूको फाइदाको लागि हाम्रा सबै वित्तीय र मानवीय संसाधनहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौं।
पृष्ठभूमि: पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशन धेरै फ्रीमासनहरू र प्रकाश कलाकार ओलिभर बिनेकोस्की द्वारा स्थापित गरिएको थियो। ह्याम्बर्गमा रिसेनमा मेसनिक अस्पताल रहेको छ, जुन रेडक्रसद्वारा संचालित हो, साथ साथै ह्याम्बर्गको मध्यमा मेसोनिक रिटायरमेन्ट होम। ह्याम्बर्गको फ्रिमासन अस्पतालले अक्टोबर people, १3। On मा दम्म्टोरवालमा बिरामीहरूको प्रवेशको लागि पहिलो संस्थानको रूपमा खोल्यो, जुन पहिले ह्याम्बर्गमा पूर्णरूपमा अभाव थियो। यो सुरुमा महिला कर्मचारीहरूको लागि अस्पतालको रूपमा स्थापित गरिएको थियो र पुरुष सेवका लागि केहि बर्ष पछि विस्तार गरिएको थियो। जब पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशन विघटन भयो, सम्पत्ति फ्रेमाउरर हिल्फ़्सवर्क ईभीमा गयो, जो परोपकारी संस्थाको हिस्सा थियो।
हामी हाल शहर Oberwesel मा भाडा सम्पत्ति खोज्दै छौं। हामी स्थानको उपयोग अस्पतालको मर्मतसम्भारका लागि petition निवेदनहरू समन्वय गर्न र शरणार्थी शिविर र घरबारविहीनहरूका लागि क्यान्ड रोटी उत्पादन गर्न गर्नेछौं। जतिसक्दो चाँडो स्थान फेला पर्नेछ, सबै for शहरहरूको लागि हस्ताक्षर सूची यस पृष्ठमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। हस्ताक्षरहरू स collecting्कलन गरेपछि, तपाईं साइटमा हामीलाई याचिका सूचीहरूमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। जनमत १ मे २०२० भन्दा पहिले सुरु हुनेछ
हामी मारेनहौसद्वारा हाम्रो खरीद प्रस्ताव उल्लेख गर्न असफलतामा अन्य शेयरधारकहरूको स्पष्ट धोखेबासी देख्छौं। पिक्सेलहेलर फाउन्डेसन गैर नाफा GmbH ले कोबलेन्ज र एसोसिएसन मेहर डेमोक्रेटि eV को प्रशासनिक कानून वकीललाई सम्पर्क गरेको छ "अप्रिल,, २०२० को प्रस्ताव रद्द गर्नका लागि" असाधारण शेयरधारकहरूको बैठक "शुरू गर्न जनमत संग्रह जाँच गर्न। जनमत संग्रहका लागि सबमिशन तयार छ, तर कानूनी रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ। जनमत संग्रहले शहर प्रशासनलाई असाधारण शेयरधारकहरूको बैठकमा निर्णय लिन बाध्य पार्छ। एक कर्पोरेट कानून वकील प्रतिस्पर्धी कानुनी चरणहरू परीक्षण गर्दछ। एक असाधारण शेयरधारकको बैठक संग, शेयर P पिक्सेल हेल्पर फाउन्डेसन gGmbH लाई तोकिन्थ्यो, र Oberwesel मा थप १ घर संचालन जारी राख्न सकिन्छ, वरिष्ठ नागरिक केन्द्र को संरक्षण को रूप मा।
यद्यपि हामीले हाम्रो टेकओभर प्रस्ताव मारीनहौस होल्डिंगका लागि कम्पनीका प्रवक्तालाई दुई पटक ईमेलको माध्यमबाट पठाएका थियौं, हाम्रो प्रस्तावको लागि कुनै प्रतिक्रिया देखाएन तर हर्बर्ट फ्राइलि fromको टेलिफोन कलबाहेक।
लोरेली अस्पताल र वरिष्ठ नागरिक केन्द्र Oberwesel को लागी प्रमुख महत्व को एक सार्वजनिक सुविधा हो। अन्तिम शेयरधारकहरूको अप्रिल on, २०२० को बैठकमा, मारिएनहास जीएमबीएचले यसको प्रतिक्रिया देखाएनन्, यद्यपि पिक्सलहेलर फाउन्डेसन गैर-नाफा जीएमबीएचबाट टेकओभर प्रस्ताव आएको थियो, र यसका बारेमा सबै अनुसन्धानहरू भने कुनै अर्को अधिग्रहण प्रस्तावहरू उपलब्ध थिएनन्। हामी कपटपूर्ण गलत बयानको आपराधिक अपराध देख्दछौं। मारिएनहोस अन्य अस्पतालहरूमा सूची सारिन्छ र अन्तमा वरिष्ठ केन्द्रलाई नगद गाईको रूपमा सुरक्षित गर्न चाहन्छ। जर्मनीमा यस्तो काम गर्ने स्व-रोजगारदातालाई दिवालिया अपराध मानिन्छ। जो कोही इन्भेन्ट्रीमा सर्दछ, अर्थात् अस्पतालको सम्पत्ति, एक आसन्न दिवालियापन अघि अभियोजनको लागि उत्तरदायी छ। बिरेजेन जस्ता अन्य क्लिनिकहरूको दिशामा अस्पताल मारिएनहास जीएमबीएच द्वारा नरभक्षक थियो। हामी सबै सेयरधारकहरूलाई मारिएनहास जीएमबीएच सेन्ट गोबर ओबरवेजल जीएमबीएच अस्पताल कम्पनीबाट सोध्न आग्रह गर्दछौं। एक नाफा नकमाउने कम्पनीका रूपमा, पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेसनले नाफाको कुनै वितरण गर्दैन तर सिनियर सेन्टर र अस्पताललाई भविष्यमा नाफा नाफाका कारणले नेतृत्व गर्नेछ।
दान रसिद तुरून्त पठाइनेछ। तपाईको ट्रान्सफर रसिद कर कार्यालयको लागि receip २ .० सम्म दान रसिदको लागि पर्याप्त छ।
कि एक प्रकाश प्रक्षेपण संग संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयt PixelHELPER फाउंडेशन सेन्टको बन्दमा परिणत हुन्छ। Goar / Oberwesel हाम्रो सुझाव: गैर-नाफा जीएमबीएच पिक्सेल हेल्पर फाउन्डेसनले% 55% सेयर लिन्छ यदि राइनल्यान्ड प्यालेटिनेट स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पताल संरचना कोषबाट, जुन पहिले नै छुट्याउने भुक्तानीका लागि छुट्याइएको छ, कर्मचारीको तलबका लागि, अस्पतालको निरन्तर संचालन र विस्तारको लागि, जसले पिक्सलहेल्परलाई क्लिनिकको मर्मत गर्ने र ओभरवेजल अस्पतालमा १ वर्ष भन्दा बढीको लागि सबै कर्मचारीहरुलाई राख्न अवसर प्रदान गर्दछ। सेन्ट मा घर गोर तेस्रो विश्वको लागि भेन्टिलेसन मेशिनहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। मारबर्ग विश्वविद्यालयले चाँडै नै अफ्रिकाको लागि सार्वजनिक बजारमा सरल भाँडो उपकरणहरू प्रस्तुत गर्नेछ। हार्डवेयर स्टोरबाट काठ सामग्री र साधारण भागहरूको साथ, भेन्टिलेटरहरू ती देशहरूको लागि पनि निर्माण गर्न सकिन्छ जुन हालमा काम गर्ने अस्पताल प्रणाली छैन। यसबाहेक, पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशन सेन्ट अस्पतालमा एक कार्य कार्यालयको साथ गोरले अन्य गैर नाफामुखी सहायता प्रस्तावहरू सेट गर्‍यो जस्तै धेरै खाद्य स्थिरताको लागि क्यान्ड रोटी बेकरी, हल्का कला महोत्सव आयोजना गर्नुहोस् र सेन्ट गोअर र ओबरवेसलका नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन थप कदमहरू चाल्नुहोस्। अर्को महामारी आउँदैछ, शीतयुद्ध हुनुभन्दा अघि जर्मनीमा 40० भन्दा बढी सहयोगी अस्पतालहरू थिए, जुन बचतको कारण बन्द भएका थिए। महामारीको समयमा, हामी अधिक अस्पतालहरू बन्द गर्न सक्दैनौं। जेन्स स्पानको जवाफ ईमेलको साथ, राइनल्याण्ड-प्यालेटिनेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन्दर्भमा। राजनीतिज्ञहरूले अब छिट्टै कदम चाल्नु पर्छ। Th 22 औं अस्पतालको निरन्तर संचालन र तलबका लागि लाखौं अनुदान जारी गर्नु पर्दछ र नयाँ नाफा नकमाउने अपरेटिंग कम्पनीको साथ आगामी केही वर्षमा अस्पताललाई कालो शून्यमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ, किनभने मारिएनहास जीएमबीएचको विपरितमा, नाफा नकमाउने जीएमबीएचले नाफा कमाउनु पर्दैन। कम्तिमा सामान्य अस्पतालका कामका लागि ओबरवेजेलमा अस्पताल फेरि खोल्नका लागि यो उत्तम तरिका हो। हामी आरएलपी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अपील गर्दछौं कि स्ट्रक्चरल कोषबाट रकम रिलीज गर्न, पिक्सेलहेल्पर फाउन्डेशनमा सेयरहरू मरिनहोस जीएमबीएचमा हस्तान्तरण गर्न र ओबरवेजल अस्पतालबाट कर्मचारीहरूलाई बचाउन। ताकि हामी भविष्यमा राम्रो आधारभूत हेरचाहको लागि अस्पताल र सेवानिवृत्ति घर सँगसँगै काम गर्न सक्दछौं। राइनल्याण्ड-प्यालाटिनेटको सरकारले मध्य राइनमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको दृष्टिकोणका साथ ओबरवेलमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बाध्य छ, हामी आशा गर्दछौं कि राजनीतिज्ञहरूले प्रवेश गर्ने छन्। मारिएनहास जीएमबीएच को कम्पनी प्रवक्ता Frieling लाई ईमेल द्वारा खरीद प्रस्तावलाई अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिइएको छैन। तर हामी यो मान्दछौं कि जर्मन रेडक्रसलाई जस्तै 55 55% हिस्सेदारी हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरिएको थियो, मारिएनहास जीएमबीएच पनि हामीलाई एक यूरोको XNUMX XNUMX% शेयर प्रस्ताव गर्न इच्छुक छ।
प्रोक्सी द्वारा लोरेली क्लिनिक बचत गर्न नागरिकहरूको निवेदन अगस्ट 13th, 2020Oliver Bienkowski
05 नोभेम्बर 2011
मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध भूमि खानको सट्टा पुन: स्थापना
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 5। नोभेम्बर 2011
समाप्त बिरुवा र मलको साथ रूख डार्ट्स ड्रप गर्दै
ल्याण्डमाइनको सट्टा फोररेस्टेशन। मोरक्कोको सबैभन्दा ठूलो अखबारले आज अस्ट्रेलियाली संसदलाई मोरक्कोका राजालाई हर्क्युलस -११० ल्यान्डमाइन विमान दिन आग्रह गरेको छ भने हामी यसलाई मोरक्को र अस्ट्रेलियाको जंगलको पुनरिक्षणका लागि रूपान्तरण गर्न अनुरोध गर्दछौं। हाम्रो मोरक्को स्थानमा यहाँ एउटा सानो कारखानाले रूख डार्टहरू उत्पादन गर्ने मानिन्छ जुन त्यसपछि झर्छ। तर हामी मोरक्कोको राजाको सहयोग बिना केहि गर्न सक्दैनौं। किनभने उसले हाम्रो अन्तिम पत्रहरूमा प्रतिक्रिया देखाएन, हामी कुनै अवसरको कल्पना गर्दैनौं, तर हामी सकारात्मक आश्चर्यका बारे खुसी छौं।
3D प्रिन्टरबाट रूख डार्ट्स
मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध भूमि खानको सट्टा पुन: स्थापना अप्रिल 21st, 2020Oliver Bienkowski
22 2011 सक्छ
कसले हेर्छन्। निगरानी विरुद्ध अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 22। मई 2011
र संयुक्त अमेरिका को संयुक्त राज्य बर्लिनमा अमेरिकी दूतावासको पर्खाल र जर्मनीमा अन्य अमेरिकी वाणिज्य दूतावासहरूमा डुसेलडोर्फ, फ्रान्कफर्ट र हैम्बर्ग सहित। यो कारण एनएसए र अमेरिकी गुप्त सेवामा बेकार जासूसी हो।
कसले हेर्छन्। निगरानी विरुद्ध अभियान अप्रिल 21st, 2020Oliver Bienkowski
???????????? हाम्रो गैर लाभ बिना तपाईंको दान बिना गर्न सक्छन् ??????????????????? ?????????
निसस्त्रीकरण एन्ड्रोइड एप बहरीन 13 संघीय Chancellery संघीय खुफिया सेवा रंगीन बुद्धि सेवा झाडी आगो चीन भीड कोष Erdogan आगो यातना freeRaif नि: शुल्क अभिव्यक्तिको राय हरकुलस मानवीय सहायता अभियान अभियान केटालोनिआ landmines प्रेमलाई कुनै सीमा छैन प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ स्ट्रिमहरू लाइभस्टिम स्विम मद्दत लोरेली मोरक्को मेरो NSA घर मा Oberwesel राजनीतिक कैदीहरू ओर्रन्डोका लागि इङ्गेरी हतियार सउदी अरब दल सहायता स्पेनिश स्प्रिंग Spirulina Uighurs उइघुर संरक्षण स्वतन्त्रता संयुक्त अमेरिका को संयुक्त राज्य upcycling हतियार व्यापार हो हामी स्क्यान गर्दछौं! अनुगमन
छाप / छाप